ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်းဝင်
TIME မဂ္ဂဇင်း အွန်လိုင်းက စီစဉ်သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ရွေးချယ်ရာတွင် မြန်မာ နိုင်ငံက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အမှတ်စဉ် ၆၇တွင် ရွေးချယ်ဖော်ပြခံရသည်။
သြဇာအရှိဆုံး အဖြစ် TIME မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာများ၏ ရွေးချယ်ခံရသူမှာ အာရှသွေး အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘတ်စကက်ဘော အားကစား သမား Jeremy Lin ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် သမ္မတ မစ္စတာ ဘားရက်အိုဘားမားက အမှတ်စဉ် ၆၁ တွင်လည်းကောင်း၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင်တန်က အမှတ်စဉ် ၈၈ တွင်လည်းကောင်း ရွေးချယ်ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
TIME မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာများက နှစ်စဉ် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သြဇာကြီးသူ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ကိုရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။
မဂ္ဂဇင်း အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင်လည်း စာဖတ်ပရိသတ်များ ဆန္ဒသဘောထား ပေးနိုင်သည့် ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ရွေးချယ်မှု စစ်တမ်း တခုကို ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
စာရင်းပိတ် ဆန္ဒမဲစာရင်းအရ ဦးသိန်းစိန်သည် ပရိသတ်၏ ထောက်ခံမဲ ၁၁၆၃၀ နှင့် ကန့်ကွက် မဲ ၄၈၉၀ ရရှိသည်။
ဦးသိန်းစိန်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း တချိန်က ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသန့်၏ မြေးဖြစ်သည့် သမိုင်းပညာရှင် စာရေးဆရာ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက ရေးသားထားသည်ကို TIME မဂ္ဂဇင်း အင်တာနက် စာမျက် နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် သမ္မတ ရာထူးလက်ခံရရှိပြီး ၁ နှစ်ကျော်အကြာတွင် ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်နေရာ အခြား နိုင်ငံများနှင့် မတူ၊ တကယ့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဗိသုကာအဖြစ် ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင် ဦးသိန်းစိန်သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ၊ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသမားများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီနှင့် အခြားပါတီများ၊ တက်ကြွသည့် လူလတ်ပိုင်းများ၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ဟန်ချက်ညီ ဆက်ဆံရေး အလွန်ပြေပြစ်သည့်အတွက် အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားသည်။
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ ဦးသိန်းစိန်သည် ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရအဖြစ်ဆီသို့ ဦးတည်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို အားစိုက် လုပ် နေကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ခံနေရပြီး တိုင်းပြည် စီးပွားရေးနောက်ကျ ကျန်နေခဲ့သည့် လူဦးရေ ၅၅ သန်းကျော်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့်လည်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြ ထားသည်။
ပရိသတ် ဆန္ဒမဲပေးစဉ်ကာလကလည်း နေပြည်တော် သမ္မတရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက မြန်မာမျိုးချစ်များအနေဖြင့်အဆိုတော် လေဒီ ဂါဂါ ထက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို မဲပေး ရွေးချယ်သင့်ကြောင်း အင်တာနက် လူမှု စာမျက်နှာများတွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဦးသိန်းစိန်သည် ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်၂၀၀၅ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးကို တိုးမြှင့်ခံရပြီး ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ(ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ)၏ ခေါင်းဆောင်များထဲက တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်း ကွယ် လွန်ပြီးနောက် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၀န်ကြီးချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလဆန်းပိုင်းက စစ်တပ်မှ အနားယူလိုက်ပြီး နေပြည်တော် ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအား ကိုယ်စားပြုကာ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ အနိုင်ရခဲ့ သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက် ဦးသိန်းစိန်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၈ ဦးမြောက် သမ္မတ ဖြစ် လာသည်။
TIME မဂ္ဂဇင်း၏ သြဇာ အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Jeremy Lin သည် ပရိသတ် ထောက်ခံမဲ ၈၉၆၉၁၊ ကန့်ကွက်မဲ ၉၅၇၀၊ အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက ထောက်ခံမဲ ၂၅၃၇၃၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂၃၇၈၃၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မစ္စ ဟီလာရီ ကလင် တန်က ထောက်ခံမဲ ၁၈၀၉၃၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၄၇၅၇ စသဖြင့် အသီးသီး ရရှိကြသည်။
အခြား ကျော်ကြားသူများဖြစ်သည့် လေဒီ ဂါဂါ သည် ပရိသတ်ထောက်ခံမဲ ၃၂၃၉၃၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၉၉၄၆၊ တရုတ် နိုင်ငံမှ အိုင်ဝေေ၀ သည် ပရိသတ် ထောက်ခံမဲ ၂၀၃၉၃၊ ကန့်ကွက်မဲ ၈၇၈၀ နှင့် ဘီယွန်းဆေး သည် ပရိသတ် ထောက်ခံမဲ ၁၉၀၀၈၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂၃၂၄၅ တို့ ရရှိကြောင်း TIME မဂ္ဂဇင်း အွန်လိုင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း အဆိုပါ သြဇာအရှိဆုံး လူပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ အတွက် ပဏာမ စာရင်း၌ ပရိသတ် ထောက်ခံ မဲ ၄၅၆၈၈ ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၂၆၂၅ ရရှိသော်လည်း TIME မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာများက ရွေးချယ်ဖော်ပြသော နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ တွင် ပါဝင်သည်ကို မတွေ့ရှိရပေ။
* TIME မဂ္ဂဇင်း၏ သြဇာ အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ ကို ဤ လင့်တွင် ကြည့်ရှုရန်
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:55 PM ,0comments
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဂျပန်ခရီးစဉ် စတင်မည်
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ၅ ရက်ကြာခရီးစဉ်အဖြစ် မနက်ဖြန်တွင် စတင်သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဂျပန်နှင့် မဟာမဲခေါင် နိုင်ငံများ၏ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ ပြင်ပတွင်လည်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေးပြောဆိုရန်လည်း ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အထီးကျန်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးဆီသို့ အသွင်းကူးပြောင်းရေး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် တစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံက ငွေကြေး ကူညီမည့်အစီအစဉ် ပြန်လည် စတင်နိုင်ရေး ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ယိုရှိဟိကိုနိုဒ က ကြေညာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
ယခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဂျပန်ခရီးစဉ်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၈ နှစ်တာအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှ အဆင့်အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တဦး၏ ပထမဆုံးခရီးစဉ် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဂျပန်အရာရှိက ပြောသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိပ်သီး စီးပွားရေးသမားများနှင့် အစိုးရ ၀န်ကြီး တချို့လည်း လိုက်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ဂျပန် စီးပွားရေးဝန်ကြီး အပါအ၀င် ဂျပန် အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းတာ ၀န်ရှိ သူများ၊ ဂျပန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်လည်း တွေ့ဆုံရန်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံအား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုများကြောင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အကူအညီပေး ရေးနှင့် တချို့သော နည်းပညာ အကန့်အသတ် အကူအညီပေးမှုများမှလွဲ၍ အဓိက အကူအညီ ပေးမှုများဖြစ်သည့် ပြည်ပနိုင်ငံများအား ဂျပန်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကူညီမှု (ODA) ကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်က ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကာလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသား ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ခန်ဂျိနာဂအိသည် မြန်မာအစိုးရ စစ် သားတဦး၏ သေနတ်ဖြင့် အနီးကပ် ပစ်သတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ဂျပန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး တင်းမာခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဘဏ္ဍာနှစ် ၁၉၈၇ ခုနှစ်ကတည်းက အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အတိုးနည်း ချေးငွေများ မြန်မာကို စတင်ချေးခဲ့ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံက ဂျပန်နိုင်ငံအား ကြွေးမြီ ဂျပန်ယန်းငွေ စုစုပေါင်း ဘီလီယံ ၄၈၀ ခန့် ပေးရန်ရှိကြောင်း၊ တချို့သော ကြွေးမြီများကို ၂ နိုင်ငံ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ ဆွေးနွေးပြီးနောက် လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်ကြောင်းလည်း သတင်းများက ဆိုသည်။
အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီများ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိပြီးနောက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့က ကြားဖြတ် ရွေး ကောက်ပွဲတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့သည်။
ထို့နောက်ပိုင်း ဂျပန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီး ဂျပန်ဘက်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးပြဿနာ အခက်အခဲများ ပြေလည် စေရေးအတွက် လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်လည်ပတ်နိုင်မည့် စတော့ဈေးကွက် ပေါ်ထွန်းရေးကို အထောက်အကူပြုမည့် နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေး ကုမ္ပဏီတို့၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဂျပန်ဘက်က ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဂျပန် လေကြောင်း ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် All Nippon Airways (ANA) ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာမီ ပြန်လည် ပြေးဆွဲရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။
ပဲခူးမြို့တွင် ဒုတိယမြို့နယ် တရားသူကြီး၏ ဇနီးက မီးပူဖြင့်လက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းခံခဲ့ရသော အိမ်ဖော် မအေးယုအောင်ကို အိမ်ရှင် များက အလိုမတူဘဲ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံနေရကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူက စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်သည်။
ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ်ရပ်ကွက်ရှိ တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၏ ဇနီး ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်က ၎င်းတို့ထံတွင် အိမ်ဖော် အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေ သော မအေးယုအောင်အား မီးပူဖြင့် အရေပြားများ စုတ်ပြဲသည်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် သတင်းပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်ကြိုး စားသော် လည်း အိမ်ရှင်များက အတင်းအကျပ် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြူကြူ က ပြောပြသည်။
“သူတို့က ခုချိန်ပြန်လွှတ်လိုက်လို့ စစ်ဆေးမှုတွေပေါ်ထွက်လာရင် သူတို့ဒုက္ခရောက်မှာကြောက်လို့ သမီးကို ပြန်မလွှတ်တာ။ ကျမ သမီးကိုသွားတွေ့တုန်းကလည်း ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်က ကျမကိုပါ တရားစွဲမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ သူတို့က ဒဏ်ရာတွေ ပျောက် ကင်းသွားမှ ပြန်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်”ဟု ဒေါ်ကြူကြူ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယခုအခါ သမီးဖြစ်သူ မအေးယုအောင်မှာ ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း၊ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက် တို့နှင့်အတူ ပဲခူးမြို့တွင်ရှိနေပြီး မိခင်ဒေါ်ကြူကြူ နှင့် လည်း ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးကြောင်း၊ မအေးယုအောင် မှာ မီးပူဖြင့် ကပ်ခံထားသော လည်ပင်း၊ ရင်ဘတ်၊ လက်မောင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက် တို့တွင် ဒဏ်ရာများ အပြင်းထန်ခံစားနေရကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ယင်းအမှုကို ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သော ပဲခူးတိုင်း လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အထူး အဖွဲ့ ရဲ အရာရှိများ ပြောဆိုချက်အရ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်မှ မအေးယုအောင်အား မီးပူဖြင့် ကပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အလားတူ မအေးယုအောင် ကလည်း ပဲခူးမြို့ လူမှုကူညီရေးအသင်းက ရိုက်ကူးထားသော ရုပ်သံ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတွင် မီးပူဖြင့်အကပ်ခံရကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
သမီးဖြစ်သူ သတင်းအားကြားသိရပြီး၂ ပတ်ကျော်အကြာတွင် ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းထံ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်ရာ၊ ဦးအောင်ဖုန်း ဝင်း က ရန်ကုန်မြို့တနေရာသို့ ခေါ်ဆောင်၍ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အလှူငွေဟုဆိုကာ ကျပ် ၃ သိန်း ပေးကြောင်း၊ မိမိ အနေဖြင့် စာမတတ် ၍ ဦး အောင်ဖုန်းဝင်း လက်မှတ်ထိုးခိုင်းသော စာရွက်ပေါ်တွင် လက်ဗွေ နှိပ်ပေးခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ကြူကြူ က ဆက်ပြောသည်။
ယခုအခါတွင် သမီးဖြစ်သူမအေးယုအောင်နှင့် ဆက်သွယ်လို၍ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာတွင်လည်း အိမ်ရှင်များက ဖုန်းပိတ်သဖြင့် ဆက်သွယ်၍မရသကဲ့သို့ မူရင်းနေထိုင်သည့် နေအိမ်မှ ရွှေ့ပြောင်းသွားသဖြင့် အဆက်သွယ်ပြတ်တောက်နေကာ သမီးဖြစ်သူ အတွက် စိုးရိမ်နေရသည်ဟု ဒေါ်ကြူကြူက ဆိုသည်။
မအေးယုအောင်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်နှင့် ဘုရားဖူးခရီး ထွက်နေကြောင်း၊ ၎င်းတို့မှာ ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင်သာ နေထိုင်ကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်မရှင်းလိုကြောင်း တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောချင်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင် ထားပြီး သားပါ။ သူ့ကိုပေးတဲ့ ငွေကလည်း သက်သက်လှူတာပါ။ နစ်နာကြေး ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး”ဟု ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း က ပြောသည်။
ယင်းအမှုအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်မည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသက်ဆွေ ကမူ မအေးယုအောင် မတရား နှိပ်စက်ခံရမှုနှင့် ပတ် သက်ပြီး မိခင် ဒေါ်ကြူကြူ က ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကာ တရားစွဲဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြော သည်။ အမှုလိုက်ရန်အတွက်လည်း ရှေ့နေများက သက်သေ အထောက်ထားများ စုဆောင်းလျက် ရှိကြောင်း ခိုင်လုံသည့် အထောက်ထားများ ရရှိထားကြောင်း ပြောဆိုသည်။
“အထောက်အထား တွေက ဒီနေ့မှထပ်ရတယ်။ ကာယကံရှင် ကောင်မလေး(မအေးယုအောင်) ဒါမှမဟုတ် သူ့အမေ(ဒေါ်ကြူကြူ) သဘောတူညီမှုကိုစောင့်ပြီးတာနဲ့ တရားစွဲဖို့ လုပ်ရမှာပါ။ ဒဏ်ရာကတော့ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသိတာဆိုတော့ ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။ ပတ် ဝန်းကျင်သက်သေတွေလည်း ရှိထားတယ်”ဟု ဦးသက်ဆွေ က ဆိုသည်။
ယခုအမှုတွဲတွင် ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တရားသူကြီး ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းကို အမှုဖျောက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုသွား ရန်ရှိသကဲ့သို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာ နယ်မြေခံ အမှတ် (၃) စခန်းမှူး ဦးသိန်းဦးကိုလည်း အမှုထိန်ချန်မှုတို့ဖြင့် တရားစွဲရန်ပြင် ဆင်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးအေးမြင့် က ပြောသည်။
“ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းက အမှုကို ငွေပေးပြီး ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒဏ်ရာတွေကို ဆေးစစ်မှာစိုးလို့။ ကလေးကို မိဘထံပြန် ထည့် မပေးဘူး။ စခန်းမှူးက ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ဆီမှာ ကောင်မလေးက သွားတိုင်တာ အိမ်ရှင် ဦးအောင်ဖုန်းဝင်းကို ခေါ်ပြီး ပြန် ထည့်ပေး လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့တို့ကိုပါ တရားစွဲဖို့ ပြင်တာ”ဟု ဦးအေးမြင့် က ပြောသည်။
မအေးယုအောင် ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ နယ်မြေခံအမှတ် (၃) ရဲစခန်းသို့ ယနေ့အထိ တိုင်ကြားလာမှုမရှိကြောင်း၊ ကွင်းဆင်း စုံစမ်း ရာတွင်လည်း အိမ်ရှင်က မီးပူဖြင့် ကပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် မီးပူဖြင့် ထိမိခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု စစ်ချက်များ ရရှိထား ကြောင်း စခန်းမှူး ဦးသိန်းဦး က ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
ဒေါ်ကြူကြူအနေဖြင့် စာမဖတ်တတ်ဘဲ ဦးအောင်ဖုန်းဝင်း ပေးသော စာရွက်ပေါ်တွင် လက်ဗွေနှိပ်ခဲ့မှုသည် အမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြေအေးကြောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါက တရားစွဲဆိုရာတွင် အခက်ကြုံနိုင်ကြောင်း တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးသက်ဆွေ က ပြော သည်။
မအေးယုအောင် မီးပူဖြင့်အကပ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းများ ပျံ့နှံ့လာပြီးနောက် တပတ်အကြာတွင် နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် (နရခ) က စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သဖြင့် ပဲခူးတိုင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ က ကွင်းဆင်း စုံစမ်း ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ခံ ဒု ရဲမှူး ဦးရဲဝင်းအောင် က ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ယနေ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ထိုအမှုနှင့် ပတ် သက်၍ ၎င်းတို့ဌာနနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
* ပဲခူး အိမ်ဖော် နှိပ်စက်ခံရမှု နေပြည်တော် ရဲ စုံစမ်း
* မီးပူနဲ့ကပ်တယ်၊ လက်မှတ်လိမ်ထိုးခိုင်းတယ်
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:37 PM ,0comments
အစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဖွဲ့ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စဉ်းစားနေ
တိုးတက် ပြောင်းလဲလာနေသော နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပြည်တွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အရှိန် ရလာသည်နှင့် အမျှ ချမှတ်ထား သော ရည်ရွယ်ချက်များကိုထိရောက် အောင်မြင်နိုင်ရေး နေပြည်တော် အစိုးရအဖွဲ့ ပြင်ဖွဲ့ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် စဉ်းစားနေပြီဟု သတင်း ရရှိသည်။
နေပြည်တော်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူများက ဝန်ကြီး ၃၇ ဦး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရအဖွဲ့ကို လာမည့် ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း သမ္မတ အနေဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ရာ နီးစပ်ရာ “ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူ” များနှင့် အကျိုးအပြစ်တို့ကို တိုင်ပင်နေကြောင်း သိရသည်။ ၄င်းတို့က “ခေါင်းမာသူ” များသည် “တာဝန်ပြောင်းခံရ” သို့မဟုတ် “တာဝန်လျှော့ချခံရ” နိုင်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
လန်ဒန်ထုတ် ဖိုင်နန်ရှယ်တိုင်းမ် (Financial Times – FT) သတင်းစာ အွန်လိုင်း သတင်းတပုဒ်တွင်လည်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲအပြတ်နိုင်သွားခြင်း၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့မှု တဝက် တပျက်သာ လျှော့ချခြင်းတို့ကြောင့် “ခေါင်းမာသူ” များအကြား လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို သံသယများ တိုးလာနေသောကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့တွင်းနှင့် လွှတ်တော်တွင်းတွင် အာဏာလွန်ဆွဲလာရသည်ဟု ရေးသားထားသည်။
“ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှုတွေနောက်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါ” ဟု နေပြည်တော်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သူတဦးက FT ကိုပြောထားသည်။ “အခုဆို စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေက ဘယ်မှာလိုနေသလဲ၊ ပိုထက်တဲ့ ပိုအားကောင်းတဲ့သူတွေ ဘယ်မှာလိုနေသလဲ စသဖြင့် ပိုရှင်းလာနေပါတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ချန်ထားရစ်မယ်၊ ဘယ်တာဝန်တွေ ဘယ်သူ့ပေးမယ် ဆိုတာကတော့ မဆုံးဖြတ်ရ သေးဘူး” ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောသည်။
အစိုးရနှင့်နီးစပ်သူ တခြားတဦးကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရှေ့ဆက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှာ “ချိန်ခွင်လျှာသစ်” ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဇော်၏ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့က ရေးသားခဲ့သော “လူမှန်နေရာမှန်” ဆောင်းပါးတွင် “ပညာရေး ဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး၊ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး၊ စွမ်းအင်ဝန်ကြီး၊ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး စတဲ့ ဝန်ကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ စီမံကိုင်တွယ်မှုတွေမှာ အရည်အချင်းရောရှိရဲ့လား၊ အလုပ်ရော တကယ်လုပ် နိုင်ရဲ့လား၊ ဘယ်လောက် ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်သလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်” ဟု တိုက်တွန်းရေးသားခဲ့သည်။
“သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီး တနှစ်ကျော်တဲ့အထိ အလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ အရင် စစ်အစိုးရတုန်းကလိုပဲ အမူအကျင့် မပြောင်းဘူး၊ နေရာမှန်မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက သင့်တော်တဲ့လူတွေ၊ အရည်အချင်း ရှိသူတွေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အ စားထိုးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ” ဟုလည်း ရေးသားထားသည်။
၎င်းတို့အား တာလောကြီးရွာရှိ မြန်မာစစ်တပ် ခလရ အမှတ် ၃၇ စစ်ကြောင်းမှ တာလောကြီးနှင့် ရှဒန်ပါ ငှက်ပျောခြံကြား "မန်မော (Man Manu)" ရှ့တန်းနေရာများသို့ “လမ်းပြများအဖြစ်” ခေါ်ဆောင်သွားစဉ် KIA နှင့် ပြင်းထန်သည့်တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွါးပြီး ကျဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ယင်းဒေသမှ KIA အရာရှိများဆိုသည်။
သို့သော် “၎င်းတို့သည် စစ်သားများ မဟုတ်ပဲ တာလောကြီးကျေးရွာမှ MHH ခေါ် အရပ်သားတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ ဖြစ်သည်ဟု KIA က ဆို သည်။
တရုတ် ကြေးနီ ကုမ္ပဏီကို ရွာလုံးကျွတ် ဆန္ဒပြ
မုံရွာ ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်၊ ဆည်တဲ ကျေးရွာသား များသည် ကြေးနီ စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်နေသော တရုတ် ကုမ္ပဏီကို တမြန်နေ့ (ဧပြီလ ၁၇) ရက်နေ့က ရွာလုံးကျွတ် ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု မုံရွာမှ လာသော သတင်းက ဆိုပါသည်။
ဤကုမ္ပဏီသည် လယ်ယာမြေများပေါ်သို့ စီမံကိန်း ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ လာရောက် စွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ဒေသခံ တောင်သူများ က တားဆီးရာမှ ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရွာသားများသည်၊ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းများ လာရောက် စုပုံခဲ့သည့် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ကားနှင့် ၀န်ထမ်းကိုလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ထဲကို ခေါ်ယူ လာပြီး ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်နေကြစဉ်မှာပင် ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ် ရဲစခန်းမှူးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး ပစ်ခတ် လူစုခွဲ ရလိမ့် မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆည်တဲရွာကိုလည်း ရဲက ၀ိုင်းထားဆဲ ဖြစ်သည်ဟု သတင်းကဆိုပါသည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လဆန်းပိုင်းကလည်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒုန်းတော၊ ဂုဏ်တောနှင့် ရွာသာရွာက တောင်သူ များ၏ စိုက် ပျိုးခင်းပေါ်သို့ မြန်မာယမ်စီ ကုမ္ပဏီက ကြေးနီလုပ်ငန်း စွန့်ပစ်မြေတွေ လာရောက် စုပုံခဲ့သည့် အတွက် သီးနှံ များ ပျက်စီး ခဲ့မှုကြောင့် ဒေသခံတောင်သူ (၈၀) ခန့်သည် ကုမ္ပဏီရုံးကို သွားရောက် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ ကိုလည်း စာရေးသား တိုင်ကြားခဲ့ကြပါသည်။
တရုတ် အမျိုးသားပိုင် မြန်မာယမ်စီ ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဦးပိုင် လိမိတက်နဲ့ ကြေးနီ ထုတ်လုပ်ရေး ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆည်တဲရွာသည် တရုတ် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု၏ ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေသည့် စီမံကိန်း နယ်မြေထဲ၌ ပါဝင်နေ ပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ဖိအားပေး ပြောင်းရွေ့ပေးရန် တောင်းဆို ခံထားရသည့် ရွာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
NLD ၏ တင်ပြချက်ကို အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံးက ပယ်ချ
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုသည့် အခါ အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပါမည် ဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် ကျိန်ဆို ရမည်ဟု သတ်မှတ် ထားသည်ကို NLD အမတ် များက အခြေခံ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာပါ မည်ဆိုသည့် စကားရပ်နှင့် ပြင်ဆင် ပေးရန် အစိုးရထံ တင်ပြ ထားချက်ကို နေပြည်တော် အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံးက ယမန်နေ့က ပယ်ချ ခဲ့သည်ဟု NLD ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုပါသည်။
ဤကိစ္စ အတွက် အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံးသည် တမြန်နေ့က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ရှင်းပြ ခဲ့သည့်အတွက် သိခဲ့ ရသည်ဟု NLD ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဆိုပါသည်။
"ဆောင်ရွက်နေတာ အဆင်မပြေ သေးဘူးပေါ့လေ။ Interpretation လိုင်းကို တင်ပြတော့ ဒါကို မဆိုင်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း သူက ရှင်း ပြတာ။ အဲဒါပါပဲ။ ပြင်ပေးရန် အကြုံး မ၀င်ဘူးပေါ့။ ပြင်ပေးလို့ မရဘူး မဟုတ်ဘူး။ ဒီရုံး အနေနဲ့ ပြောတာပေါ့နော်။ အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံးပါ။"
အခု ပြောဆိုချက် သည်လည်း အခြေခံ ဥပဒေ ခုံရုံး၏ သဘောထား တစ်ခုသာ ဖြစ်သေးသည့်အတွက် သမ္မတ အပါအဝင် အစိုးရ တစ်ဖွဲ့ လုံး၏ သဘောထား မဟုတ်သေးကြောင်း၊ ဤသဘော ထားကြောင့် လာမည့် ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့၌ ပြန်လည် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကို NLD ကိုယ် စားလှယ်များ တက်ရောက် နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါသည်။
ဤပြသနာမျိုး နိုင်ငံရေး ပါတီ တည်ထောင်ရေး ကာလ ကလည်း ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ နိုင်ငံရေး ပါတီ တည်ထောင် လိုသူများ အနေဖြင့် အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပါမည်ဟု ကတိပြုရမည့် အစား အခြေခံဥပဒေကို လေး စားလိုက်နာ ပါမည် ဆို သည့် စကားရပ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင် ပေးခဲ့သည့်အတွက် NLD အနေနှင့် ပါတီ မှတ်ပုံပြန်တင်ပြီး ရွေး ကောက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 12:08 PM ,0comments
မလေးရှား ဥပဒေနှင့် အိမ်ဖေါ် လုပ်ငန်း တရား စီရင်မှု
မလေးရှား နိုင်ငံသား အိမ်ရှင် လင်မယားသည် ယင်းတို့၏ အိမ်ဖော် မိန်းခလေးကို သတ်မှုဖြင့် တရား ရုံးတွင် အမှု ရင်ဆိုင် နေရပါသည်။ မှုခင်း ရဲများ၏ ယူဆချက် အရ အသက် - ၂၄ နှစ် အရွယ်ရှိ အိမ်ဖော် မိန်းခလေး Mey Sichen သည် ရက်ပေါင်း များစွာ အစာ ပြတ်လတ် ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့သည်။
ယခုဖြစ်ပွားခဲ့သော လာမည့် စက်တင်ဘာတွင် အသက်- ၂၄ နှစ်ပြည့်မည့် ကမ္ဖောဒီးယား နိုင်ငံသူ Mey Chian ကို မလေးရှား အလုပ်ရှင် (အိမ်ရှင်) မှ သတ်မှုသည်၊ မလေးရှားသို့ ကမ္ဖောဒီးယားနှင့် အင်ဒိုနီးရှားမှ အိမ်ဖော် အလုပ်သမား ပေးပို့ ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း ရသည့် အမှု အကြောင်းအရင်း များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု AFP က ပြောဆိုသည်။
ကုန်မာ ဆိုင်ပိုင်ရှင် Soh Chew Tong (အသက်- ၄၃ နှစ်) နှင့် သူ၏ ဇနီး Chin Chui Ling (အသက်- ၄၀) တို့ သည် ပီနန် (Penang) မြောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးတွင် ယင်းတို့၏ အိမ်ဖော်အား ဇန်န၀ါရီ ၁- ရက် (၂၀၁၂) မှ ဧပြီ ၁- ရက်ကြား ကာလ ရှည်ကြာစွာ အစာဖြတ် ပြီး ညှဉ်းပမ်း နှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့၍ တရားစွဲ ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေ Nurdeenie Abdul Rashid ကပြောသည်။ ဤအမှုသည် လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံပြီး ဖြစ်သည့် အပြင်၊ ၀န်ခံပြီးပါက ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ-၃၀၂ အရ သေဒဏ် (ကြိုးမိန့်) ကျခံရနိုင် ကြောင်း Nurdeeni (DPP) က ဆက်ပြော ပါသည်။ ယခုအခါ မှုခင်းဆေးဆရာဝန် စစ်ဆေးမှု ရလဒ်ကို စောင့် နေသည်ဟု Nurdeenie (DPP) ကပြောသည်။
အမှုဖြစ်ပွားသည့် နေရာမှာ 2190 Taman Asas Murni, Jalan Bukit Minyak, Bukit Mertajam, Penang ရှိ ကုန်မာဆိုင်ခန်းနှင့် တွဲထားသော ၃-ထပ် အဆောက်အုံတွင်ဖြစ်သည်။ တရားရုံးတွင် တရုတ် စကားပြန်မှ စွဲဆိုထား သော အမှုကို ဘာသာပြန်ပေးရာ လင်မယားနှစ်ဦးလုံး တည်ငြိမ်စွာ ရှိနေပြီး၊ စောဒက တက်ခြင်း မရှိ ကြောင်း၊ အသနားခံခြင်း မရှိကြောင်း The Star (Saturday 14, 2012) က ဆိုသည်။ လူသတ်မှုဖြစ်၍ အာမခံရနိုင်ခြင်း မရှိသည့် အတွက် တရားရုံးပြီး သည်နှင့် ပီနန် အချုပ်ထောင်တွင် ယင်းတို့ကို (၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၂ မှစ၍) ချုပ်နှောင် ထားသည်။ ယင်းတို့အတွက် ကိုယ်စားပြုသည့် ရှေ့နေမှာ Michael K.L. Chee ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ကြိမ် တရားရုံးရက်ချိန်းမှာ ဇွန်လ ၇- ရက်နေ့ ၂၀၁၂ ဟု တရားသူကြီး Chang Kian Hong ကသတ် မှတ်ခဲ့သည်။
မတ်လ ၃၁-ရက်နေ့တွင် အိမ်ရှင် လင်မယားက သူတို့၏ အိမ်ဖော် ကျန်းမာရေးမကောင်း ဆိုကာ ကျန်းမာရေး လုပ်သားများကို ခေါ်ခဲ့ သည်။ သူတို့ရောက်ချိန်တွင် Mey Chian မှာ သေဆုံးနေပြီးဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ရှိချိန်တွင် သူမသည် ကိုယ်အလေးချိန် ၂၆- ကီလို (၅၇- ပေါင်) သာ ရှိသည်။ သူမကိုယ်အနှံ့ ကုတ်ခြစ်ရာ၊ ဒဏ်ရာများစွာ တွေ့ရသည်။ (ABC News, MSN Malaysia News).
Mey Chian ကို တရားခံ ပိုင်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံ အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ ထားသော စတိုခန်း (ဒုတိယထပ်) တွင်သေဆုံး သည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ (Bernama သတင်းစာ) ရဲဘက်မှပြောသည်မှာ Mey Chian သည် အချိန် ကာလကြာရှည်စွာ အစာ မစားရ သောကြောင့်၊ အစာအိမ်ပြင်း ထန်စွာရောင်ခြင်းနှင့် အစာအိမ်တွင် အနာများဖြစ်၍ သေဆုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ Mey Chian သည် သူ၏ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် မလေးရှားတွင် အိမ်ဖော် အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့သည်မှာ ၈-လ မျှသာ ရှိသေးသည်။ (၂၀၁၁- စက်တင်ဘာမှ စ၍)
၂၀၁၁- အောက်တိုဘာတွင် ကမ္ဖောဒီးယားနိုင်ငံသည် မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော် အလုပ်သမား ပေးပို့ခြင်းကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့သော အမှုများစွာ ယခင် ကလည်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနောက် အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင်၊ မလေးရှား အိမ်ရှင်တို့၏ အိမ်ဖော်တို့ အပေါ် ဆိုးဝါး ရက်စက်မှုများ၊ အလုပ် ၀န်ပိစေမှုများ၊ လိင်အကြမ်း ဖက်မှုနှင့် မုဒိန်းကျင့်မှုများ၊ စသည့် အမှု များစွာ တို့သည် ကမ္ဖောဒီးယား အပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံမှ အိမ် ဖော်များကိုလည်းကျူးလွန်ကြကြောင်း ပေါ်ထွက်သိရှိလာခဲ့ရသည်။ မလေးရှားတွင် လုပ်ကိုင်နေသော ကမ္ဖောဒီး ယားနိုင်ငံသူ အိမ်ဖော်နှင့် အိမ်အကူ အလုပ်သမား ၅၀,၀၀၀ ကျော် ရှိပါသည်။
ထို့သို့ အမှုများစွာ ရှိခဲ့၍ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည်လည်း မလေးရှားသို့ အိမ်ဖော်အလုပ်သမား ပေးပို့ခြင်းကို ၂၀၀၉ ခု နှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်း ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ မလေးရှားသည် ကမ္ဖောဒီးယားမှ အိမ်ဖော် အလုပ်သမား ပိုမိုတောင်းဆိုခဲ့ သည်။
ယခုအခါ မလေးရှား အစိုးရ ပိုင်းဆိုင်ရာ တို့သည် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရနှင့်လည်း အိမ်ဖော် အလုပ်သမား ပြန်လည် ရရှိ ရေးအတွက် ကြိုး ပမ်းလျက် ရှိကြသည်။ မလေးရှိ အင်ဒိုနီးရှား သံရုံးမှ အရာရှိ တစ်ဦးကပြောသည်မှာ မလေးရှား သည် အိမ်ဖော် အလုပ်သမား များကို ယခင်ကထက် ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးပြီး၊ ပိတ်ရက်များ (တစ်ပတ်- ၁-ရက်)၊ ဥပဒေများ ပြဌာန်းပေးမည်ဟု ဆိုကာ အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုမည့် စာပိုဒ် ပြင်ဆင် ရေးသားရန် အတွက် အန်အဲလ်ဒီ ပါတီမှ သမ္မတ ရုံးသို့ အကြံပြုလွှာ ပေးပို့ထားပြီးနောက် ယနေ့ တွင် အန်အဲလ်ဒီ ပါတီ ဗဟို အလုပ်မှုဆောင် ဦးဥာဏ်ဝင်းမှ ယင်းကိစ္စကို ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ များတွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကတိ သစ္စာပြုချက် နည်းဥပဒေ ၅(ဂ)နှင့် ၉(က)တွင် "ကျွန်ုပ်…..သည် လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံရပြီး ဖြစ်သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့် ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများ ကိုလည်း လိုက်နာပါမည်"ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ ဖော်ပြချက် စာပိုဒ်အား ပြင်ဆင်ပေး ရန်အ တွက် အန်အဲလ်ဒီမှ တောင်းဆို ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဧပြီ (၂၃) ရက်နေ့ တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်း အဝေး များသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်မည်၊ မတက်ရောက်မည်ကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန် ထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း ထပ်မံ ရွှေ့ ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးအုံးကြိုင်က ပြော ကြား သည်။ မည်သည့်နေ့ရက်တွင် အနိုင်ရ အန်အဲလ်ဒီ ကိုယ်စားပြု အမတ်လောင်းများ လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်နိုင်မည်ကို ဦးဥာဏ် ဝင်း၏ နေပြည်တော်မှ ပြန်ရောက် လာပြီးမှသာ ထပ်မံ အတည်ပြု နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:53 AM ,0comments
ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေထံသွားရောက်ခဲ့တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူ Levi Sap Nei Thang နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နှင့် မြန်မာ အစိုးရတပ်တွေ အကြားဖြစ် ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲ တွေဟာ ယနေ့ ချိန်ထိ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ဆက်လက်ဖြစ် ပွားနေဆဲပါ။ ၁၇နှစ်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့ရာက တိုက် ပွဲတွေ ပြန်လည်စတင်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၁၀ လ ကျော် ရှိလာပါ ပြီ၊ တိုက်ပွဲကြောင့် မြေဇာပင် အပြစ်မဲ့ ကချင်ပြည်သူလူထုတွေ စစ်ဘေးရှောင် ရင်း ဒုက္ခသည်ဘ၀ကို ကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလို ထောင်သောင်း မကတဲ့ ကချင်ညီအကို ဒုက္ခသည်တွေကို တဖက်တ လမ်းကနေ အကူအ ညီတွေ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ I Love Myanmar ကို တည်ထောင်သူ ချင်းတိုင်းရင်း သူ Daw Levi Sap Nei Thang ဟာ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းကဘဲ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းကို ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်ခဲ့ပါ တယ်။
I Love Myanmar အဖွဲ့ဟာ လူမျိုးဘာသာ မခွဲခြားဘဲ မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် အဖက် ဖက်ကနေ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ကျရောက်ခဲ့တုန်းကလည်း I Love Myanmar အဖွဲ့က ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ပြီး အိုးအိမ် မဲ့ဖြစ်နေကြ တဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် နေအိမ်တွေ ဆောက် တာမျိုး၊ ကျောင်းဆောင် တွေ ဆောက်ပေးတာမျိုး စတဲ့ လူမှု အကူအညီတွေကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါ တယ်။
ယခု ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် စခန်းကို ကိုယ်တိုင်းသွားရောက်ခဲ့တဲ့ Daw Levi Sap Nei Thang ကို ခိုနူမ်းထုန်သတင်းဌာနကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။
မေး ။ ။ ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဘယ်တုန်းက သွားရောက်ခဲ့လဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့လဲဆိုတာ ပြောပြပေးလို့ရမလား။
ဖြေ။ ။ ဧပြီလ ၄ ရက် နှင့် ၅ ရက် နေ့တွေမှာ ကချင်စစ်ဘေးသင့်ဒုက္ခသည်စခန်း စုစုပေါင်း ၁၅ နေရာ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌါနရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နှင့် စီစဉ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်သူနဲ့မှ အဆက်အသွယ် မရှိခဲ့လို့ ဘယ်သူ့ကတဆင့် လှူဒါန်ရမှန်း ကူညီရမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဋ္ဌါန ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးဋ္ဌါနကနေ အရာရှိတွေ က ကချင်ပြည်နယ်အထိ လိုက်ပို့ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်းကြီးနဲ့ လဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဘယ်ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ သွားရောက်ခဲ့တာပါလဲ။
မြစ်ကြီးနား၊ ၀ိုင်းမော် ပါတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားက စခန်းတွေကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ KIA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နယ်မြေ ဘက်တော့ မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုရောက်ခဲ့တဲ့ဒေသမှာက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေများတော့ ဘုရားကျောင်း ၀င်းထဲမှာ စုပြီးနေကြတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဘုရားကျောင်း ၁၅ ကျောင်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း အနေနဲ့ ကတော့ စစ်ဘေးသင့်သူတွေကို ထားတာ တစ်ခုဘဲ ရှိတယ်။
မေး ။ ။ ဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေးပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ စသွားကတည်းက အိမ်ယာဆုံးရှူံးခဲ့သူတွေ အိမ်ယာမြေပြန်လည်ဆောက်ပေးဘို့ ရည်ရွယ် ချက်နဲ့ သွားခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ဆရာမကြီး အနေနဲ့ (သို့) I Love Myanmar အနေနဲ့ပေါ့ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ။
ဖြေ ။ ။ ကျမအနေနဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ အလှူလုပ်သမျှကို I Love Myanmar နာမည်နဲ့ဘဲ လုပ်ပါတယ်။ ပထမသုတ်အနေနဲ့ အိမ်အလုံးတစ်ရာ ဆောက်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
မေး ။ ။ အိမ်အလုံးတစ်ရာ ဆောက်မယ်ဆိုတာက… ဘယ်လိုအိမ်မျိုးလဲ၊
ဖြေ ။ ။ အိမ်ပုံစံကတော့ ထွက်လာပါပြီ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်း၊ ပေ ၂၄×၂၄
မေး ။ ။ အဲဒီအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက် ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ဖို့ လွှဲအပ်ပေးခဲ့လဲ။ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုလား၊
ဖြေ ။ ။ လူမှု ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌါနက လမ်းညွှန် အကူညီ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမက တခြားအသိလဲ မရှိဘူးလေ။ ဋ္ဌါနက အခုလဲ ကူညီဆောင် ရွက်ပေးနေပါ တယ်။ ထပ်မံကူညီလိမ့် မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။
နာဂစ်ဒေသမှာတုန်းက လုပ်ခဲ့သလိုမျိူး အိမ်တွေကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်တာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲ ကျမကိုယ် တိုင် ရှေ့ဆက် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သွားချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အိမ်ဆောက်ပေးထားပြီးရင်လဲ သူတို့လိုအပ် မယ့် လုပ်ကိုင်စား သောက်ဘို့ အရင်းအနှီး၊ မိသားစုအရေး၊ ပညာရေး စသည်တို့ကိုလည်း အသေး စိတ် စောင့်ရှောက်ပေးချင်တယ်။ နာဂစ်မှာတုန်းကတော့ လှူဒါန်းခဲ့တာ အရမ်းများလွန်းတော့ အားလုံးအတွက် အသေးစိတ် ဂရုမစိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။
မေး။ ။ အိမ်တွေက အခုစတင်ဆောက်နေပြီလား၊ ဘယ်တော့လောက် အပြီးဆောက်ကြမှာလဲ။
ဖြေ ။ ။ အခြေအနေမျိုးစုံကို ကြည့်ရင် အိမ်ဆောက်ပေးဘို့ အစီအစဉ်ကို နိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိ သူတွေက လက်မခံသေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရမချင်း အိမ်ယာစီမံကိန်းကို မရှိစေချင်ကြသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ဘဲ စလုပ်ချင်နေပြီ။ မိုးမကျခင်တော့ အပြီးဆောက်ချင်ပေမယ့် မသေချာသေး ဘူး။
မေး ။ ။ အိမ်တွေကို ကချင်ပြည်နယ် ဘယ်ဒေသတွေမှာ ပြန်ဆောက်ပေးမှာလဲ ။
ဖြေ ။ ။ မြစ်ကြီးနား နှင့် ၀ိုင်းမော် ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ။
မေး ။ ။ ခုလိုမျိူး ကချင်ညီအကို ဒုက္ခသည်တွေကို မြင်တွေ့ရတော့ အမ ဘယ်လိုခံစားမိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ရာသီဥတုဘေးဒါဏ်သင့်သူတွေနဲ့တော့ မတူဘူး။ ရာသီဥတုဘေးဒါဏ် သင့်သူတွေ ဆိုရင်တော့ သူတို့ ဘ၀ကို အစကနေ ချက်ချင်း ပြန်စပေးလိုက်လို့ ရတယ်။ အခု စစ်ဘေးသင့်သူတွေက အကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတာလဲ မဟုတ်သေးဘူးလေ။ တစ်ချို့ဆိုရင် သူတို့ရွာကို ပြန်ချင်နေကြ တယ်၊ ပြန်လို့ လဲမရသေးတော့ ခက်တယ်လေ။ ရွာမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် တွေဆိုရင် လဲ တပ်က သတ်စားလို့ ကုန်ပြီလို့ပြောတယ်။ တောင်ယာတွေ ကိုတော့ ပြန်လုပ်မယ်ဆို ရင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဆိုတော့ ကျမလဲ သူတို့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ရွာကို မီးရှို့ခံရလို့ အိမ်မရှိ တော့တဲ့သူတွေ၊ အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်မရှိတော့တဲ့သူတွေ၊ လယ်ယာလုပ်စားဘို့ မရှိတော့တဲ့သူ တွေကိုတော့ အိမ်ဆောက်ပေးပြီး လယ်ယာလုပ်ကိုင်ဘို့ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
မေး ။ ။ ခုလက်ရှိ ကချင်ဒုက္ခသည် ဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ သိခဲ့ရပါလား။
ဖြေ ။ ။ ခုနှစ်သောင်းကျော် ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေလေးကို ပြောပြပေးပါလား၊ ဥပမာ – ဘယ်လိုနေထိုင် ကြလဲ၊ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေ၊ ပညာရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေကြလဲဆိုတာ စသဖြင့်ပေါ့။
ဖြေ ။ ။ စစ်ဘေးသင့်သူတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ ယာယီတဲထဲမှာ နေကြရတယ်။ ယာယီ တဲတွေက များသော အားဖြင့် ဘုရားကျောင်းဝင်းထဲမှာ ဆောက်တာများတယ်။ မြေနေရာအလွတ်တွေ ရှိတယ်လေ။ တဲကတော့ ထရံကာ သွပ်မိုး နဲ့ဆောက်တာ ရှိ သလို။ ပလပ်စတစ်အမိုးနဲ့ အကာ နဲ့ ဆောက်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ မိုးရွာပြီဆိုရင် အားလုံးရေစိုကုန်တယ်။ မိုးရာသီရောက်ရင်တော့ ပိုဆိုးမယ် မလွယ်ဘူး။ ယာယီတဲတွေကိုတော့ UN က ဆောက်ပေး ထားတာ များပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့ ယာယီတဲတွေ လုပ်ပေးတာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ စောစောပိုင်းက ဒီလိုယာယီတဲ တွေလိုအပ်မှန်း ကြိုသိခဲ့ရင် ကျမလဲ လှူချင်တာပေါ့။ စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ တဲတစ်တဲကို သိန်း ၅၀ လောက်ဘဲ ကုန်ကျပါ တယ်။
စားဝတ်နေရေးကတော့ UN, World Food Program ကနေ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ အာဟာရမှုန့် တို့ကို ပေး ပါတယ်။ ပြင်ပကနေ လှူတာ မရှိပါဘူး။ အစားအသောက်အတွက်တော့ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါဘူး။ ပညာရေးအနေ နဲ့တော့ အခုလောလော ဆယ် ကျောင်းပ်ိတ်ထား ပါ တယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်းမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ဆည်တဲကျေးရွာက လယ်ယာမြေတွေပေါ်မှာ စီမံကိန်း ဘေးထွက်ပစ္စည်း တွေ လာရောက် စွန့်ပစ်တဲ့အတွက် ဒေသခံ တောင်သူတွေက တားဆီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ လာရောက် စုပုံတဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ကားကိုလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကို ခေါ်ယူလာပြီး ၀ိုင်းဝန်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတယ် လို့ ဆည်တဲရွာသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အဲဒီလို ဆန္ဒပြ ကန့်ကွက်နေကြစဉ်အတွင်း ဆားလင်းကြီးမြို့ နယ် ရဲစခန်းမှူးနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ရောက်ရှိလာပြီး ပစ်ခတ် လူစုခွဲရလိမ့် မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ဆည်တဲရွာကိုလည်း ရဲက ၀ိုင်းထားဆဲ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆည်တဲရွာသူက နောက်ဆုံးအခြေအနေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆည်တဲရွာဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီမံကိန်းနယ်မြေထဲမှာ ပါဝင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာက ဖိအားပေး ပြောင်း ရွေ့ခိုင်းထားတဲ့ ရွာတစ်ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေသခံတွေက သူတို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ယာမြေတွေကို မစွန့်ခွာတဲ့အတွက် အခုလို ကားတွေနဲ့ လယ်ယာ မြေပေါ်မှာ စီမံကိန်း ဘေးထွက်ပစ္စည်းတွေ လာရောက် စုပုံနေတာဖြစ်ကြောင်း ရွာသူရွာသားတွေက ပြောဆိုပါတယ်။
အလားတူ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းပိုင်းကလည်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒုန်းတော၊ ဂုဏ်တောနဲ့ ရွာသာရွာက တောင်သူတွေရဲ့ စိုက်ပျိုး ခင်းတွေပေါ်မှာ မြန်မာယမ်စီ ကုမ္ပဏီက ကြေးနီလုပ်ငန်း စွန့်ပစ်မြေတွေ လာရောက် စုပုံခဲ့တဲ့အတွက် သီးနှံတွေပျက်စီးခဲ့တာကြောင့် ဒေသခံတောင်သူ (၈၀) လောက်က ကုမ္ပဏီရုံးကို သွားရောက် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတထံကိုလည်း စာရေးသား တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
အခုအခါ ဂျပန် ပင်လယ်စာ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ အတော်များများ မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို စိတ်ဝင်စားနေကြတယ်လို့ ဂျပန် ငါးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနတစ်ခုက ဖော်ပြပါတယ်။
ဂျပန် ငါးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံက ငါးသေတ္တာငါးတွေကို တခြားနိုင်ငံကို တင်ပို့၊ အသင့်စားသုံးနိုင်အောင် ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ပြီး ဂျပန်ကို ပြန်သွင်းကြပါတယ်။
မူလက လူနဲ့ လုပ်အားပေါတဲ့ တရုတ်ပြည်ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ တရုတ်ပြည်မှာ လုပ်အားခတွေ ဈေးတက်လာတဲ့အတွက် ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ်ကိုပါပို့ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ထိုင်းမှာလည်း လုပ်ခဈေးနှုန်းတွေ ပြင်ဆင်တိုးမြှင့်လိုက်ရာမှာ အလုပ်ရှင်တွေက အလုပ်သမား ခံစားခွင့်တွေ ရုပ်သိမ်း လိုက်တဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြခဲ့ကြလို့ ဂျပန်ကိုပို့မယ့် ပင်လယ်စာစက်ရုံ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် ဂျပန် ပင်လယ်စာ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ မျက်စိကျလာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းတွေအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေ မလုံလောက်သေးတာက အဓိကပြဿနာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဂျပန် ငါးကုန်သည်ကြီး တစ်ယောက်က - ပင်လယ်စာ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းမှာ ကျန်းမာရေး စံချိန်စံညွှန်း အဆင့်မီဖို့ အထူးလိုအပ်လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတွက် မြန်မာပြည်မှာ စံချိန်မီ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ မရှိသေးပါဘူး။ နောင်မှာ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာမယ်ဆိုပေမဲ့ အချိန်အတော် ယူရပါဦးမယ်။ ဒီတော့ တရုတ်ကို ပို့နေတဲ့ နော်ဝေး ငါးသေတ္တာငါးတွေကို မြန်မာပြည်ပြောင်းပို့ဖို့ ချက်ခြင်းလက်ငင်း မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဧပြီလ (၂၀) ရက်နေ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တိုကျိုမြို့ကို ရောက်ရှိပြီး ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ယိုရှီဟီကို နိုဒါနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ဒီအစီ အစဉ်ကို ၀န်ကြီးချုပ်က ကြေညာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်အတွက် ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာလူငယ် အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်း (၂၀) ကို လက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေ အနေနဲ့ ဂျပန်တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဥပဒေ၊ အုပ်ချုပ်ပုံနည်းစနစ်၊ မူဝါဒချမှတ်ပုံ စတာတွေအပြင် ဘဏ္ဍာရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍ တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို လေ့လာ ဆည်းပူးနိုင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရက ဒီမိုကရေစီ ဈေးကွက်စီးပွားရး အခြေခံတွေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျှော့ချရေးတွေ စတင်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ ဒီ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေ မရှိသလောက် ရှားပါးနေတယ်လို့ ယူမီယူရီ ရှင်ဘွန်း သတင်းစာက ရေးသားပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:35 AM ,0comments
မေလ (၂၇) ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာ နိုင်ငံ က နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ တက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ အာအက်ဖ်အေကို ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းက မနေ့က အတည် ပြု ပြောဆိုပါတယ်။
ဦးကျော်သူနဲ့အတူ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်လည်း လိုက်ပါလာမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာလူမှုရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမေရိ ကန်ပြည်နယ် တချို့ကို လှည့်လည် ဟောပြောမယ်လို့ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုထိန်လင်းက ပြော ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူမှုလုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင် ရွက် နေသူတွေကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (Citizen of Burma Award) ဆု ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းက နှစ်စဉ် ချီးမြှင့် ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်း ချီးမြှင့်ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:31 AM ,0comments
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရဲရင့်ဝံ့စားလှတဲ့ အခုန် အပျံ အကျော် အလွှားတွေအပေါ် ထောက်ခံအားပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လို့လည်း ပြောဆို ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီ နေရာအများစု အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာ နိုင်ငံအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးရေးနဲ့ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမှာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် သီတင်းပတ်အတွင်း မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အရေးယူမှုတွေကို ဘယ်လို လက်တွေ့ကျကျ လျှော့ပေါ့နိုင်ခြေတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီး အိုဘားမား အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ကြားနာပွဲတစ်ရပ် ခေါ်ယူ ကျင်းပမယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ်နီးစပ်တဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ကျောက်မျက်လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခွင့်တွေ ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံခွင့် ပြုလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အရင် စစ်အစိုးရဟောင်းနဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်နေသူတွေဟာ အပြောင်းအလဲကို စိုးရိမ်နေကြတာကြောင့် မြန်မာပြည် ရှေ့ဆက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် မက်လုံးတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း မစ္စတာ ဂျင်မ်ဝက်ဘ်က ပြောဆို ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီလို သတင်းထွက်နေတဲ့အတိုင်း ကြွေးမြီလျှော်လိုက်ပြီဆိုရင် မြန်မာအစိုးရ အနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံထံက နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ် အကြာမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထပ်မံချေးယူနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို တစ်နှစ်တာ ရပ်ဆိုင်းမှာ ဖြစ်ပြီး၊ လက်နက် ရောင်းဝယ်မှုကိုတော့ ခြွင်းချက်အဖြစ် ဆက်လက် ပိတ်ဆို့ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက သံမှူးတွေဟာ ဘယ်လ်ဂျီယန်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အီးယူအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ အစည်းအဝေးကနေ တရားဝင် အတည်ပြုပေးရမှာလို့ ဆိုပါတယ်။
အီးယူ ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ပိတ် ဆို့အရေးယူမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံကို GSP ခေါ် "ကုန်သွယ်မှု အထူးခံစားခွင့်" နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ကုန်တွေ အီးယူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် အထူးခံစားခွင့် ပေးသွားမယ်လို့လည်း ပြောနေကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အောင်မြင်မှု နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင်များ ချီးကျူး
19 ဧပြီ 2012
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေ ဧပြီလ တစ်ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အများစုကြီး အနိုင်ရပြီး လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ရှိ သွားမယ့် အောင်မြင်မှုကို နိုဘဲလ်ဆုရှင်များနဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ The Elders အဖွဲ့ကြီးက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဟာ လွှတ်တော်ရဲ့ နေရာ အနည်းစုကိုသာ ရတယ်ဆိုပေမဲ့ အတိုက်အခံပါတီတွေအဖြစ် ရှေ့လျှောက် ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပထမခြေ လှမ်းကို လှမ်းနိုင်လိမ့်မယ် လို့လည်း သူတို့က မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
The Elders အဖွဲ့ရဲ့သဘာပတိဖြစ်တဲ့ နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် ဘုန်းတော်ကြီး Desmond Tutu က ပြောဆိုရာမှာတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ညီမငယ်ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုံးဝလေးစားပါတယ်၊ သူ့ရဲ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမှုက မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ကို ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အချိန်ပဲဆိုတာကို ကမ္ဘာက ဘယ်တော့မှ မေ့တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း အမှန်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ NLD ပါတီအပြင် တခြား နိုင်ငံရေး ပါတီတွေ လိုအပ်နေတာက လွှတ်တော် ထဲမှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ နေရာကနေ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့် နေရာတွေ ရဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလိုသာ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အတွက်ရော ကျနော်တို့ အားလုံးအတွက်ပါ ဒါက သိပ်ကို စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ဘုန်းတော်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရာနဲ့ချီပြီး လွှတ်ပေးခဲ့တာ အပါအ၀င် အလုပ်သမားဥပဒေတွေကို ပြင်ဆင်တာ၊ မီဒီယာ တင်းကျပ်မှုတွေကို ဖြေလျှော့တာနဲ့ NLD ကို ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု ခဲ့တာတွေကိုလည်း The Elders အဖွဲ့က ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခြေလှမ်းတွေ ပိုအား ကောင်းစေဖို့ အတွက် ကျန်နေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်း ခြွင်းချက်မရှိ ထပ် လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ လွှတ်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို လှုပ်ရှားခွင့် ပြုဖို့တွေကိုလည်း The Elders အဖွဲ့က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ပန်းတိုင်ထိ ရောက်အောင်သွားဖို့လည်း တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံတကာကို အကြံပေးရာမှာတော့ မြန်မာအစိုးရဘက်က တိုင်းပြည် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး လုပ်နေတာကို ပိုပြီး အကူအညီ ပေး နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေရှာဖို့နဲ့ အစိုးရကို လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး တိုက်တွန်းသွားဖို့နဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနဲ့ နည်းပညာအကူအညီအတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့နဲ့ နိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေတဲ့ စာနာထောက်ပံ့ရေး တွေအတွက် အကူညီပေးသွားဖို့လည်း The Elders အဖွဲ့က အကြံပေးထားပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:12 AM ,0comments
ငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ်သစ် ဆီးရီးယားနဲ့ကုလ သဘောတူ
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသံတမန် ကိုဖီအာနန်တင်ပြခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီ ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့ကြား သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသဘောတူညီချက်အရ ဆီးရီးယားကိုစေလွှတ်မယ့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရှေ့ပြေးအဖွဲ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေ အပြင် ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့ အ တိုက် အခံတွေအကြား တပတ် ကြာမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကို စောင့်ကြည့်ဖို့တွေပါဝင်တယ်လို့ မစ္စတာအာနန်ရဲ့ပြောခွင့် ရကပြောပါတယ်။ ညှိနှိုင်းသူတွေဟာ အတိုက်အခံအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါ အလားတူ သဘောတူညီချက်တွေ ရလာဖို့ ဆွေးနွေး နေတယ် လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ကြေညာထားပေမယ့် အကြမ်းဘက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေတာမို့ ဒီအကြမ်းဘက်မှုတွေကြား လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ရမယ့် စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ကို ပိုတိုးဖို့ ကုလသမဂ္ဂ မှာ ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အရေအတွက်ကို သုံးဆယ် ကနေ ၃၀၀ ကြားမှာ ချထားဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ကြာသပတေး နေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို အဖွဲ့ဝင်အများအပြားပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ကို မစေလွှတ်ခင်မှာ ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေကို ကုလ သမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေ သေသေချာချာ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဂျာမဏီ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလ သံအမတ်ကြီး ပီတာ ၀စ်တစ်ဂ်က ပြောပါတယ်။
ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ အရှေ့ပိုင်းဒေသက မြို့တမြို့မှာ ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ စစ်တပ်ကနေ အတိုက်အခံတွေဘက် ထွက်ပြေး ခိုလှုံ လာသူတွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာမို့ တဦးသေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှား သူတွေက ပြောပါတယ်။
အငြင်းပွားရေနံမြေ တောင်ဆူဒန်သိမ်းယူမှု ကုလကန့်ကွက်
ရေနံတွင်းတွေရှိရာ Heglig မြို့ကို တောင်ဆူဒန်က သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာ တရားဝင်မှုမရှိသလို အိမ်နီးချင်း ဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်တယ်လို့လည်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံစလုံးက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းပြောထားတဲ့ ရေနံကြွယ်ဝရာ နယ်စပ်ဒေသကနေ တောင်ဆူဒန်တပ်ဖွဲ့တွေ ဖယ်ရှားပေးဖို့ ကြာသပတေး နေ့က ကုလသမဂ္ဂ ရုံးချုပ်ရှိရာ နယူးယောက်မြို့မှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက သတင်းထောက်တွေကို ပြောလိုက်တာပါ။ ဆူဒန် နိုင်ငံအနေနဲ့လည်း တောင်ဆူဒန်နယ်မြေထဲကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်နေတာကို ရပ်တန့်ပြီး အငြင်းပွားနေတဲ့ Abyei ဒေသက ဆုတ်ခွာဖို့ တောင်းဆို သွားပါတယ်။
တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံက စေ့စပ်ညှိနှိုင်းသူအဖွဲ့ရဲ့ အကြီးအကဲ Pagan Amum ကတော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းဖို့ အသင့်ရှိတဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့တာပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွင်း အငြင်းပွားနေတဲ့ နယ်မြေတွေ ကနေ နှစ်ဘက်စလုံး ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီး အချေအတင် ဖြစ်နေရတာ တွေကို နိုင်ငံတကာက ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ လိုလားကြောင်းလည်း ပြောသွားပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက် လက်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပဲ ဆူဒန်သမ္မတ Omar al-Bashir ကတော့ တောင်ဆူဒန်နဲ့ စစ်ပွဲကြီးတခု အဆင့်ကို ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာပါ။ တောင်ဆူဒန် အာဏာရ SPLM ပါတီကို အင်းဆက်တကောင်အဖြစ် ရည်ညွန်းပြီး ချေမှုန်းပစ်မယ်လို့လည်း ဆူဒန် သမ္မတက ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:07 AM ,0comments
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ချေးငွေ အထောက်အပံ့တွေ ပြန်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စ မြန်မာနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့က သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးနေကြတာဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပါပြီ။ သောကြာနေ့ စတင်မယ့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း ဒီ ကိစ္စကို အပြီးသတ် ဆွေးနွေးဖို့ ပြင်ဆင် ထားကြပါတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကနေ မြန်မာလူထု အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရ စေဖို့အတွက် ဒီအကူအညီတွေ ပြန်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်လို့ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဗွီအိုအေကိုပြော ပါ တယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ပေးခဲ့ပြီး ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တဲ့ ODA ခေါ် ပင်လယ်ရပ်ခြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အထောက် အပံ့ ချေးငွေတွေ၊ ရန်ပုံငွေ အထောက်အပံ့တွေ နဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီတွေကို ပြန်ပေးဖို့အတွက် မြန်မာနဲ့ ဂျပန်တို့က တာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးနေကြတာပါ။ ဒီလိုပြန်ပေးရေးကိစ္စမှာ အဓိကရှိနေတဲ့ကိစ္စတခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက ဂျပန် နိုင်ငံကို ပြန်ပေး ဆပ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ ချေးငွေတွေကို ဘယ်လို ပြန်ပေးဆပ်မလဲ ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်အကုန်ထိဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၀ အထိ ရန်ပုံငွေ ကို တိုးမြှင့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ ODA ချေးငွေပမာဏ မပါသေးပါဘူး။ နောက်ထပ်ချေးငွေတွေ ထပ်ပေးဖို့ကိစ္စက အရင်ပေးဆပ်ဖို့ ကျန်နေ သေးတဲ့ချေးငွေတွေကို ဘယ်လို ပြန်ဆပ်မလည်းဆိုတာ အရင်ပြေလည်ဖို့ လိုပေမဲ့ ODA ပြန်ပေးဖို့က အင်မတန် အရေးကြီးပါ တယ်လို့ မစ္စတာ မဆရုက ပြော ပါတယ်။
“မြန်မာနိုင်ငံက အပြောင်းအလဲတွေကို အထောက်အပံ့ပြုဖို့အတွက်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီကို အပြည့်အ၀ တိုးချဲ့ပြီး ODA ချေးငွေ တွေကို ပြန်ပေးဖို့ကိစ္စဟာ အင်မတန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။” လို့ မစ္စတာမဆရုက ပြောပါတယ်။
ချေးငွေပြန်ဆပ်ရေးဆိုင်ရာ ပြည့်စုံတဲ့အစီအစဉ်ကို ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာရော၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပါ အပြင်း အထန် ဆွေးနွေးနေပြီး စနေနေ့မှာ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြတဲ့ အခါ တင်ပြဖို့ နောက်ဆုံးအဆင့် ပြင်ဆင် နေတာပါလို့ လည်း သူကပြောပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေ ပြီိးတဲ့အခါမှာတော့ အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် ကြေညာသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံဟာ အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို အကူအညီ အထောက်အပံ့ တွေ ပေးလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကာလတွေ မှာတောင်မှပဲ ပေးနေ ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် အရေးတော်ပုံ ကာလမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော် တွေကို ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ထဲ ဂျပန်နိုင်ငံသား သတင်း ထောက် တဦးပါ သေဆုံးခဲ့ ရပြီးတဲ့ နောက် အကူအညီ အတော်များများကို ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။
“မြန်မာလူထုအနေနဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို တကယ့်ကိုခံစားရစေဖို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ အစဉ်အလာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်းပဲ ကျင်းပမယ့် ထိပ်သီး အစည်းအဝေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံ က အပြင်းအထန် လုပ်ဆောင်နေတာပါ။” လို့ ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မဆရု ဆတို့က ပြောသွားပါ တယ်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံကို သောကြာနေ့မနက်ပိုင်းမှာ ရောက်မှာဖြစ်ပြီး လေးကြိမ်မြောက် ဂျပန်-မဲခေါင် ထိပ်သီး အစည်း အဝေးကို စနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာ တက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ဂျပန် ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ သီးခြား တွေ့ဆုံပြီး
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:04 AM ,0comments
အခု စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အဂနီ ငါး (Agni V) ဒုံးကျည်ဟာဆိုရင် - မိုင်ပေါင်း သုံးထောင်တစ်ရာကျော် အထိကို ပစ်လွှတ်နိုင်ပြီး - တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် ဘေဂျင်း နဲ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွေအထိကို နျူကလီးယား ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်နိုင်တဲ့ မဟာဗျူဟာစွမ်းရည်မှာ အကြီး အကျယ်ကို တိုးတက်မှုတခုလို့ လည်း ဖော်ပြခဲ့ကြတာပါ။
“တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ ဆိုတာ တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေ မဟုတ်ကြ ပါဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင် ဖက် တွေပါ။ လက်ရှိမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးစီးပွား ကိစ္စရပ် တွေအပေါ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက မြတ်နိုး တန် ဖိုးထား ကြမယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည် ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်းရေးကို ရှေးရှုပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ နည်းဗျူဟာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ကူညီဖို့၊ တိုးတက်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ အပြုသဘော ကူညီ ဆောင်ရွက်ဖို့အ တွက်ကို ကြိုးစားကြရ မှာပါ။”
ဒီစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှု မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း - ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတရပ်အဖြစ် မမြင်ရလေအောင် အိန္ဒိယ အရာရှိတွေကတော့ သတိထားခဲ့ကြပါတယ်။ အိန္ဒိယမှာ နျူကလီးယားလက်နက် စတင် အသုံးပြုမယ့် မူဝါဒ မရှိသလို - အိန္ဒိယရဲ့ ဒုံး ကျည်စနစ်ဟာလည်း တိုင်းပြည်တခုခုအပေါ် ရည်ရွယ် ချမှတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သူတို့က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့ နျူကလီးယားကျည်ဖူးတပ် ဒုံးလက်နက် စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကန့်အသတ်နဲ့ လုပ်ဆောင် ကြဖို့ နျူကလီးယားပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံအားလုံးကို တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အခုနှစ်ပိုင်းတွေ အတွင်းမှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် အရေးယူ ပိတ်ဆို့ထားမှု အများစု ကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ ပဏာမ သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပြီ လို့ အီးယူ ဥရောပ သမဂ္ဂ အရာရှိတွေ ကပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှာ အရေးယူ ပိတ်ဆို့ထားတာမှာ လက်နက်ရောင်းဝယ်ခွင့် မပြုတာက လွဲရင် ကျန်တာတွေ ကို ယာယီ ရပ်စဲထားဖို့ ရှိတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ အရာရှိ တော်တော်များများက ကြာသပတေး နေ့မှာ ပြောသွားတာပါ။
လူဇင်ဘတ် နိုင်ငံမှာ တနင်္လာနေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အီးယူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ် လို့ ယူဆရပါတယ်။ အီးယူ က အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ကို တစ်နှစ်တာ ရပ်စဲပေးထားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရပ်သား အစိုးရ အနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး တွေကို ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ သဘောနဲ့ အခုလိုမျိုး ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တယ် လို့ အရာ ရှိတွေ က ပြောကြပါတယ်။
ဧပြီ ၂၃ ရက် လွှတ်တော် နှစ်ရပ် ပြန်လည် ကျင်းပမည်
လာမယ့် ဧပြီလ ၂၃ ရက် တနင်္လာနေ့မှာ လွှတ်တော် နှစ်ရပ် အစည်းဝေးတွေကို နေပြည်တော်မှာ ပြန်ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ အကြိမ် တတိယ အစည်းဝေးတုန်းက လွှတ်တော် နှစ်ရပ်တွင်း မပြီးပြတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆက်ဆွေးနွေးကြဖို့ ဖြစ်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်း လွှတ်တော်တက်ဖို့ ဖိတ်ထား တယ်လို့ လွှတ်တော်ရုံး တာဝန်ရှိသူက ပြောပါတယ်။ လွှတ်တော်တွင်း ဘယ်လိုကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိသလဲဆိုတဲ့ နဲ့ NLD ကိုယ်စား လှယ်တွေ လွှတ်တော်တက်ဖို့ အလားအလာတွေကိုတော့ မသင်းသီရိက ဆက်ပြောပြပေးမှာပါရှင်။
မတ်လ၂၆ ရက်နေ့က ရပ်နားထားတဲ့ လွတ်တော် နှစ်ရပ်လုံးရဲ့ အစည်းဝေးတွေကို ဧပြီလ ၂၃ ရက် တနလ်နေ့ကျရင် နေပြည်တော်မှာ ပြန်ပြီး ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် တတိယပုံမှန် အစည်းဝေးတွင်း မပြီးပြတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်တယ်လို့ လွှတ်တော်ရုံးရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဦးက ပြောပါတယ်။
“ကျနော် တို့ ၂၃ ရက်နေ့ မှာ နှစ်ခု လုံး လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပထမအကြိမ် တတိယပုံမှန် အစည်းဝေးတွင်း မပြီးပြတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆက်တာပါ။ ဖိတ်ပြီးသား ပါခင်ဗျ။ ခုနက ပြောသလိုပါဘဲ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ တချို့  ကျန်တာလေး တွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါလေးတွေကတော့ တချို့ ဥပဒေကြမ်း ကိစ္စလေး တွေ ပါဖို့ များပါတယ်။”
အခု ကျင်းပမယ့်လွတ်တော် အစည်းဝေးကို တက်ဖို့ NLD ပါတီက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေကိုလည်း ဖိတ်ထားပြီးပြီလို့ ဦးခင်မောင် ဦးက ပြောပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ NLD ပါတီဖက် က ကျမ်းကျိန်လွာ မှာ ရွတ်ဆိုရတဲ့ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာမို့ လွတ်တော် တက်မတက် အကြောင်းပြန်တာများ ရှိပါလား လို့လည်းမေးကြည့်ပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်တို့ ဖိတ်ပြီးပါပြီ။ သီးခြား တုန့်ပြန်မှု မရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဖိတ်တာ သူတို့ ရပါတယ်။ တက်ပါ့မယ်။ သီးခြားတော့ မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ အခု ကျနော်တို့လည်း ရုံးပိတ်ရက် ဖြစ်တော့လေ။”
တတိယပုံမှန် အစည်းဝေးတွင်း ကဆွေးနွေးဖို့ ကျန်နေတာတွေကို ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးကြမှာမို့ ဘယ်နှစ်ရက် ကြာ ကျင်းပမလဲဆိုတာ မပြောနိုင် သေးပေမဲ့ လွတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စု လွတ်တော်လည်း ခေါ်နိုင်ဖို့ အလားအလာရှိတယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။
“အဲဒါတော့ ဘယ်နှစ်ရက် ကြာမလဲ ဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အခြေအနေ ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တော့ ရက်က ကြာတတ်လို့ပါ။ ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပြည်သူ့ ရော၊ အမျိုးသားရော ပေါင်းလိုက်ရင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဖြစ်တယ်ပေ့ါ။ လိုအပ်ရင် လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
နေပြည်တော် လွှတ်တော်ရုံးရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဦးကို လွှတ်တော်ပြန်စမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ထားတာပါရှင်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ နေရာအများစုနဲ့ အနိုင်ရထားတဲ့ အန်အယ်ဒီ (NLD) ပါတီကတော့ လွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ်တွေ ကျမ်းကျိန် ရာမှာ ရွတ်ဆိုရတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့အစား လေးစားလိုက်နာ ပါမယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ပြင်ဖို့ ကိစ္စကို ဧပြီ လ ၁၄ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတဆီ မေတ္တာရပ်ခံ အကြံပြုစာ တစောင်ပေးပို့ထား ပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက်လည်း အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးက နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုပြဌာန်းထားတယ် ဆိုတာကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ အန်အယ်ဒီ (NLD) ပါတီက တာဝန်ရှိတဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ခေါ်ယူရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အခြေအနေ တွေ အပေါ်မှာ အန်အယ်ဒီ (NLD) ပါတီက သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဝင်းတင်ကတော့ လေးစား လိုက်နာပါမယ် ဆိုတဲ့ စကားရပ် ပြင်မှသာ NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွတ်တော်တက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ခုနက ပြောတဲ့ အခြေခံခုံရုံး သို့မဟုတ်လည်း သမ္မတ ရုံးက နေပြီးတော့ ဘယ်လို့ စီစဉ်မလဲ တော့ မသိဘူး။ အဲဒီ စီစဉ်တဲ့ အတိုင်း အခြေခံဥပဒေမှာ ပါတဲ့ အတိုင်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည် ဆိုတဲ့ စကားရပ် အစား လေးစား လိုက်နာပါမယ် ဆိုတဲ့ စကားရပ် ကို ပြင်မှသာလျှင် လွှတ်တော်ကို တက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
NLD ပါတီက သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ သတင်းစာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ပါရှင်။
ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကနေ ပြဌာန်း လိုက်တဲ့ဥပဒေတချို့ကို သမ္မတရုံး ပေးပို့ထား ပြီးတော့ ဒါတွေဟာ အခု မှတ်ချက် နဲ့ အတူ ပြန်ကျလာတာတွေ ရှိတာမို့ ဒါတွေကို ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ ပြန်စတဲ့ လွှတ်တော်တွေ အတွင်း ဆက်ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အမျိူးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးကပြောပါတယ်။
“အဲဒါကတော့ အတိအကျ ပြောရရင်တော့ ၂၀၁၂ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥပဒေနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥပဒေပါ။ အဲဒီ ဥပဒေတွေ ကို ကျနော်တို့ က ပြင်ဆင်ချက် အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဥပဒေ အသစ်တွေ အဖြစ်ကို ရေးဆွဲ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူလ ဥပဒေတွေ ကတော့ နယက က နေပြီးတော့ ပြဌာန်း သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေတွေ ကို သမ္မတ ရုံးက နေပြီးတော့ မှတ်ချက်နဲ့ ပြန်ပေးပို့ ထားတယ် ဆိုတာ ကို ကျနော်တို့ ကြားသိ ထားရပါတယ်။ ဘယ်လို မှတ်ချက်တွေ နဲ့ ဘယ်အချက်တွေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ဖို့ ပေးပို့ ထားသလဲ ဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ သိထားရ သလောက်က တော့ ဒီ ဥပဒေတွေ ပြန်ပြင်ဆင် ဖို့ ကိစ္စပါဘဲ။ ဒီဟာ အတွက် ကို ပြန်ခေါ်တာပါ။ ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ကတော့ သိပ်ပါနိုင်မယ် မထင်ပါဘူး ခင်ဗျ။”
အမျိူးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးပါရှင်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တတိယအကြိမ် ပုံမှန် အစည်းဝေး မှာတော့ ၂၀၁၂ နောက် ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း) တွေ၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုးရီးယား ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးလက်နက် လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီ
မြောက်ကိုရီးယား နျုးကလီးယားနဲ့ ဒုံးလက်နက်တွေရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးကျည်တွေ တပ်ဆင်ထားပြီးပြီလို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်တွေ တပ်ဆင်လိုက်တဲ့အကြောင်း တောင်ကိုရီးယား စစ်ဖက်အရာရှိတဦးက တောင်ကိုရီးယား သတင်းထောက်တွေ နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောကြားလိုက်တာပါ။
မြောက်ကိုရီးယားဖက်က မအောင်မြင်တဲ့ ဒုံးပျံ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ် လိုက်ပြီး နောက်ထပ် နျုးကလီးယား စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ်နေတာကြောင့် အခုလို တပ်ဆင်တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ပဲ့ထိန်းတပ်ဒုံးကျည်ကို ပစ်လွှတ်ပုံ၊ ဝေဟင်မှာပျံသွားပုံနဲ့ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်သွားတဲ့ ဗွီဒီယို မှတ်တမ်းတွေကို တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက နောက်ပိုင်းမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဒုံးကျည်ဟာ မိုင် ၆၂၀ ကျော်အထိ အရောက်သွားနိုင်တာမို့ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းက ဘယ်နေရာကိုမဆို ပစ်လို့ရတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတဦးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရှင်ဝန်ဆစ် (Shin Won-sik) က ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားက အခု တပ်ဆင်လိုက်တဲ့ ပဲ့ထိန်းတပ် ဒုံးကျည်ဟာ ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်း ခပ်နိမ့်နိမ့်ပျံသန်းပြီး ပစ်မှတ်ကိုထိအောင် ပစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံကို လေးစားလိုက်နာမည်ပါမည်ဟု ပြင်ဆင်မှ ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်တက်မည်ဟု နယက ဦးဝင်းတင် ပြောဆို
လွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို စောင့်ရှောက်ပါမည်အစား လေးစား လိုက်နာပါမည်ဟူသော စကားရပ်ကို ပြင်ဆင်မှသာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ(ဒီချုပ်)ကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော် တက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“အခြေခံခုံရုံး ဒါမှမဟုတ် သမ္မတရုံးကနေ ဘယ်လိုစီစဉ်လဲတော့ မသိဘူး အဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း စောင့်ရှောက်ပါမည်ဆိုတဲ့ စ ကားရပ်အစား လေးစားလိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြင်မှသာလျှင် ကျွန်တော် တို့က လွှတ်တော်ကို တက်နိုင်မယ်” ဟု အန်အယ်လ် ဒီပါတီ နာ.ယ.က ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တက်ရောက်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးခြင်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟူသောစကားလုံးကို လေးစားလိုက်နာပါမည် ဆိုသည့် စကားအား ပြောင်းလဲ ကျမ်းကျိန် ခြင်း မရှိသေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
“လာမယ့် ၂၃ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ သွားပြီး တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ အနေ အထားရှိတယ်ပေါ့ သို့သော် ဘယ်မှာ ပြသာနာဖြစ်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်တဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ ပြင်ဆင်ထားသလို အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာ ပါမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ပြင်မထားဘူး အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပါမည်ဆိုပြီး ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရမယ် အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး” ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆက်ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟူသော စကားမှ လေးစားလိုက်နာပါမည်ဟူသော စကားကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ကျမ်းကျိန်ရန်အတွက် အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှ ထပ်မံ၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ စာတင်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းပြန်ခြင်းမျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“သမ္မတဆီကို စာရေးတယ်၊ သမ္မတကြီးက ရွေးကောက်ပွဲများ မှာ ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေး အန်အယ်လ်ဒီပါဝင်နိုင်ရေး အတွက်တူညီတဲ့လူကို ကျမ်းသစ္စာကျိန်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ ကူညီပါ အဲ့ဒါက အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည် ဆိုတဲ့စကားအစား ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ သုံးခဲ့တဲ့ စကားလုံးအတိုင်းပဲ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးပါလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးရှိပါတယ် အဲ့ခုံရုံးမှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လို့ရတယ် အဲ့ဒီစာတင်ထားတဲ့ဟာက အခုထိ အကြောင်းမပြန်သေးဘူး” ဟု အန်အယ်လ်ဒီပါတီ နာ.ယ.က ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ် ဧပြီလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး အတွင်းရေးမှူး ဦးဥာဏ်ဝင်းသည် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်နေခြင်းကြောင့်် လာမည့် (၂၃)ရက်နေ့တွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိ ၊ မရှိမှာ မသေချာသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
“(၂၃)ရက်နေ့မှာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့ လွှတ်တော်တက်ဖို့ဆိုတာ မသေချာသေးဘူး အဲ့ဒါကြောင့်လဲ ဒီနေ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ နေပြည်တော်သွားတယ်” ဟု အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ဦးမင်းသူကပြောသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်တွင် ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်ဟူသော အသုံး အနှုန်းမှ လေးစားလိုက်နာပါမည်ဟူသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် လွှတ်တော်အတွင်းတွင် ကျမ်းကျိန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အတွင်း အင်အားချိန်ခွင်လျှာနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ လွှတ်တော်တွင်းမှ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“တမျိုးသားလုံး ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ချက် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်လို့ မလွယ်ဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံကို လွှတ်တော်ထဲက ပြင်လို့ မရဘူး။ ၇၅ ရာခိုင်နုန်းဆိုတာ ခံနေတာ။ ဒါကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ဖြုတ်ဖို့ ပြင်ဖို့ဆိုတာ တမျိုးသားလုံး ညီလာခံဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ် ချက်ကနေပြီးတော့ လွှမ်းမိုးနိုင်မှသာလျှင် ပြင်လို့ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီညီလာခံက ၂ဝဝ၈ ကို ပြင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တခု ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါကို ဖိတ်ခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ က ပြောသည်။
“UNFC အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တချို့က အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းနေတယ်။ တချို့ကလည်း သတ်ဖြတ်နေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တောက UNFC မှာ သဘောထားကွဲသွားပြီလား ထင်ကြမယ်လေ။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေက ဘယ်လိုပဲ ခြိန်းခြောက်ပါစေ။ စည်းလုံးနေ တယ်။ တိုက်လည်း မကြောက်ဘူး။ ချော့လည်းပဲ မပျော့ဘူးဆိုတာပဲ”ဟု သူက ပြောသည်။
UNFC ၏ တောင်းဆိုချက်များထဲတွင် ဦးစွာအားဖြင့် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် UNFC ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့တို့ ‘နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ပဏာမအဆင့်’အဖြစ် တွေ့ဆုံကြရန် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် UNFC အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သည့် အခြားတိုင်းရင်းသား အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံအပြီးတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပါဝင်သည့် တမျိုး သားလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးအား လွှတ်တော်ပြင်ပတွင် ကျင်းပခေါ်ယူသွားရန် တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာအစိုးရက တင်ရှိနေသော ကြွေးမြီ ယန်း သန်းထောင်ပေါင်း ၃ဝဝ (ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃.၇ ထောင်)အား ဂျပန်အစိုးရက လျှော်ပစ် ရန်ရှိ ကြောင်း ဂျပန် Asahi Shimbun သတင်းစာကြီးက ရေးသားထားသည်။
တရားဝင်သဘောတူညီချက်ကိုမူ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် Yoshihiko Noda နှင့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ စနေနေ့တွင် တိုကျိုမြို့၌ တွေ့ဆုံ၍ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကာ ‘အပြည့်အဝ’အကူအညီများလည်း ပြန်လည်ပေးအပ်တော့မည်ဟု ဂျပန်အရာရှိများအား ကိုးကား၍ ရေးသားထား သည်။
၂၅ နှစ်ကြာ ရပ်ဆိုင်းထားသည့် အကူအညီများကို မြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုများအရ ဂျပန်အစိုးရက ဤကဲ့သို့ ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
၂ဝ၁၁ နိုဝင်္ဘာလာအတွင်း ဂျပန်အရာရှိများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ကတည်းက ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ အရာရှိများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများ စတင်ခဲ့ကြောင်း ဂျပန်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ အတွင်းဝန်ချုပ် Osamu Fujimura က ပြောသည်။
ပထမအဆင့်အနေနှင့် ယန်းသန်းပေါင်း ၁၂၇.၄ ထောင်အား လျှော်ပစ်ရန်ရှိပြီး ၎င်းမှာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်ကတည်းက သဘောတူညီခဲ့ သော် လည်း စစ်အစိုးရနှင့် အပြီးသတ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။
ထို့နောက် အတိုးငွေနှင့် ဆပ်ရန်နောက်ကျ၍ ဆောင်ရမည့်ဒဏ်ငွေ ယန်းသန်း ၁၇၆.၁ ထောင်အား လျှော်ပစ်နိုင်ရန် အတွက် နောက်ထပ် တနှစ်အတွင်း မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ တိုးတက်မှုအပေါ် အခြေခံသုံးသပ်ပြီးမှ လျှော်ပစ်မည်
အမှန်စင်စစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဂျပန်နိုင်ငံအပေါ် ကြွေးမြီအဖြစ် ယန်းသန်းထောင်ပေါင်း ၅ဝဝ ခန့် တင်ရှိထားပြီးဖြစ်၍ ကျန်ငွေ ယန်း သန်း ပေါင်း ၁၉၈.၉ ထောင်အား ပြန်ဆပ်နိုင်ရန်အတွက် ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနများမှ နောက်ထပ်ချေးငွေ သစ်များ ရယူရဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ထိုပမာဏခန့် ထပ်မံချေးပေးရန်ရှိကာ ထိုချေးငွေသစ် ပြန်ဆပ်ရက်ကိုလည်း တိုးချဲ့သတ်မှန်ပေးရန် ရှိသည်။
တင်ရှိအကြွေးများအားလုံး ကြေလည်ရေးနှစ် နောက်ထပ်အကူအညီသစ်များ စတင်ရေးအတွက် ဦးသိန်းစိန်၏ ငါးရက်ကြာ ခရီးစဉ် အတွင်း ဆွေးနွေးကြမည် ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလအတွင်းက ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်စဉ် ဒီမိုကရေစီအရေး ဦးတည်သည့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ပြုလုပ်ရန် မြန်မာအစိုးရအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဂျပန် နိုင်ငံရေးခြားရေး ဝန်ကြီး ခိုအိချီးရိုး ဂင်းဘား Koichiro Gemba မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်စဉ် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၂၆ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ဂျပန်အကူအညီများနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျမတို့ရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ အားလုံးကြားမှာ သွေးစည်းညီညွတ်မှုရှိဖို့အတွက်ကို လူသားမှုဆိုင်ရာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေပေးတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာလည်း တန်းတူရည်တူ ပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ လည်း ကျမရှင်းပြခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဂျပန်အစိုးရ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီများ ပြန်လည်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအား တရားမျှတမှု ရှိ/မရှိ အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေမည်ဟု အတွင်းဝန်ချုပ် Osamu Fujimura က ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
မြန်မာ့ဆန် ပြည်ပတင်ပို့မှုမှာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာကြောင်း ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ကြီး FAO က ထုတ်ပြန်သည်။
FAO ၏ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသ စားနပ်ရိက္ခာဆိုင်ရာ လေ့လာချက်များအရ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ဆန်တန် ချိန် ၈၄၄,၂၀၀ တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂၄ သန်း ဝင်ငွေရရှိခဲ့သည်ဟု မြန်မာအစိုးရ ကိန်းဂဏန်းများအား ကိုးကား၍ ဖော်ပြ ထား သည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အတွင်းတွင် တန်ချိန် တသန်းအထိ တင်ပို့ကာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဟု မြန်မာအစိုးရ က ရည်မှန်းထားသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ ဆန်တန်ချိန် နှစ်သိန်းကို တနှစ်အတွင်း ရောင်းချပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ အမျိုးသားကူညီထောက်ပံ့ရေး အေဂျင်စီ INLA တို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကမူ ပြည်တွင်းဆန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဖူလုံလောက်ငှရေးကို ဦးစားပေးပြီးမှ ပြည်ပတင်ပို့ မှုကို လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွက် အရန်ဆန် မရှိဘဲနဲ့ နိုင်ငံခြားကိုပဲ အတင်းစာချုပ်တွေ ချုပ်ပြီး ပို့လိုက်လို့ ပြည်တွင်းဈေးတွေ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားရင် ပြည်တွင်းဈေးတွေ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်သွားမယ်လေ။ ပြည်တွင်း လိုအပ်ချက် ဖူလုံအောင် အရန်ဆန် ထိန်းသိမ်း ထားပြီးမှ လုံလောက်တယ်ဆိုမှ ပြည်ပပို့ဖို့ ကျနော်တို့စဉ်းစားတာပါ” ဟု အသင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ဝင်းလှိုင် က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်သည့်ဆန်များကို အနောက် အာဖရိကနိုင်ငံများသို့ အများဆုံး တင်ပို့ပြီး ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနှင့် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံများ သို့ လည်း တင်ပို့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တနိုင်ငံလုံး၏ စပါးစိုက်ပျိုးမှုနှုန်းမှာ ဧက ၂၀.၄၃ သန်းရှိပြီး မိုးစပါး စိုက်ပျိုးမှု ဧကမှာ ၁၇.၂၇ သန်း ဖြစ်ကာ နွေစပါးစိုက်ပျိုးမှု မှာ ဧက ၃.၁၆ သန်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ အသင်း၏ မှတ်တမ်းများ အရ သိရသည်။
ပြည်သူလူထု၏ ပဲ့တင်သံများကို လွှတ်တော်တွင် တင်ပြသွားမည်ဟု မန်းဂျော်နီ ပြောဆို
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိသွားသော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မန်းဂျော်နီသည် ပြည်သူလူထုနှင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ပြီး ဒေသခံများ လူထုထံမှလာမည့် ပဲ့တင် သံများကို လွှတ်တော်ထဲတွင် အဓိကထား တင်ပြသွားမည်ဟု ဆိုသည်။
“ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ၊ သဘောတွေကနေ တုန့်ပြန်မှုတွေ၊ သူတို့လိုချင်တာ ဘာတွေလဲဆိုတာကို သူတို့ရဲ့ ပဲ့တင်သံကိုပဲ လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းမှာပါ။ အဲဒီအတွက် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ခိုင်းပါ။ ခိုင်းတာကိုလည်း တာဝန်ကျေကျေနဲ့ လုပ်ပေးမယ်။ နောက်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယုံကြည်ဖို့ မြောင်းမြနယ်သားအားလုံးကို ပြောချင်ပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ NLD ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးသို့ မြောင်းမြနယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် တက် ရောက်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ်မှ ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်း ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဖြစ်မဖြစ်ကို သိရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း မန်းဂျော်နီက ပြောသည်။
“လွှတ်တော်တက်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ နဲနဲအတွေ့အကြုံရှိအောင် ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကြားမှာ တစ်ခုခု ကြားနိုင်တာပေါ့။ အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး လေးစားလိုက်နာမည်ဆိုတဲ့ အချက် ၂ချက်က နည်းနည်း ပြဿ နာတက်မယ်။”ဟု ၎င်းက ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
လာမည့် ဧပြီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ တက်ရောက်ရန် သက်ဆိုင်ရာမှ တရားဝင် ဖိတ်ကြားစာ ရရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောကြား သည်ဟု AP သတင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဒေသခံပြည်သူများဘက်မှ လွှတ်တော်ထဲတွင် တင်ပြစေချင်သည့် အကြောင်းအရာများကို မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် တိတိ ကျကျ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ထားကြရန် ပထမဦးစွာ လမ်းညွှန်ပြောကြားထားကြောင်း၊ အခွင့်အရေးရှိပါက ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကရင် လူမျိုး တို့၏ အကျိုးကိုလည်း ကရင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မန်းဂျော်နီက ပြောသည်။
“ကရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကရင်ပြည်သူလူထုအရေးကိုလည်း တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်”ဟု ဆိုသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရနှင့် KNU ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေမှုများသည် လက်နက်ကိုင်ဖြေရှင်းသည့်နည်းထက် ကောင်းမွန်ပြီး နှစ်ဖက်အ ပြန်အလှန် သဘောတူညီမှုများကို လိုက်နာလျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သည် အောင်မြင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း မန်းဂျော်နီက ဆက် ပြောသည်။
မန်းဂျော်နီသည် ၁၉၄၂ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်အရှေ့မြို့နယ်၊ ဆင်ဂေါင်းကြီးကျေးရွာတွင် လယ်သမားကြီး ဦးကျော်ဦးနှင့် ဒေါ်ခြောက်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မူလတန်းပညာကို ပုသိမ်မြို့ St. Joseph’s Convent တွင် သင်ယူခဲ့ သည်။ အလယ်တန်းပညာကို ရန်ကုန်မြို့ St.Pual ကျောင်းတွင် သင်ကြားခဲ့ပြီး အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း (Matriculation) ပညာကို ပုသိမ်မြို့ Catholic Boy’s Center School, Mayamchaung တွင် သင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် B.A ဘွဲ့ကို ရန်ကုန် တက္က သိုလ်မှလည်းကောင်း၊ Dip in Education ဒီပလိုမာကို ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှလည်းကောင်း ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့သည်။
၁၉၉၀ပြည့်နှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းအဖြစ် ရွေးကောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်သည်။
ဧပြီလ ၁ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၏ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၄၅နေရာအနက် NLD မှ ၄၄နေရာ ၀င်ရောက်ယှဉ် ပြိုင်ခဲ့ရာ ၄၃နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြောင်းမြမြို့ မဲဆန္ဒနယ်တွင် မန်းဂျော်နီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ဒုက္ခသည်များအား ဒုတိယအကြိမ် လူထုရှင်းလင်းပွဲကေအဲန်ယူပြုလုပ်ပြီးစီး
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-ကေအဲန်ယူသည် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေးအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုး ရနှင့် ဒုတိယအကြိမ် သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီ ၁၆ရက်နေ့က လူထုရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
လူထုရှင်းလင်းပွဲကို ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်ရှိ ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ တပ်မဟာ(၇)နေရာတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရ နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ကေအဲန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ၆ဦးက တက်ရောက်လာသည့် မြန် မာပြည်တွင်းနှင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ လူထု ၃၀၀ကျော်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံမှုတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ကေအဲန်ယူ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန် အပါအ၀င် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုး၊ ပဒိုစောအားတိုး၊ ပဒိုစောသောသီဘွဲ၊ နော်ဘလူးမင်းနိုက်ဇံနှင့် ပဒိုစောလှထွန်းတို့က လူထုအား ရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နော်စီဖိုးရာစိန်က “ဒီတစ်ခါ အစိုးရနဲ့ သွားတွေ့တာက အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စကို တိကျသေချာအောင် သွားဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အရင်တခါသွားတာက အပစ်ခတ်ရပ်စဲကိစ္စက ပဏာမ အဆင့်ပဲ သဘောတူခဲ့တာလေ။”ဟု ရှင်းပြခဲ့သည်။
သို့သော် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စသည် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုးရုံမျှဖြင့် မပြီးသေးဘဲ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရနှင့် တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
တက်ရောက်လာသည့် လူထုများက ကေအဲန်ယူအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရနှင့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူလက်မှတ်ထိုးထား သော်လည်း ကချင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေသည်ကို ကြည့်ပါက ဆက်လက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာများကို သတိကြီးထားရန် လိုကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်တွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လိုက်ပါသွားခဲ့သူ နော်ဘလူးမင်းနိုက်ဇံက “ကချင်ဒေသဘက်မှာ တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတာ ကိုကြည့်ရင် စိုးရိမ်စရာပဲ။ ဒါက မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒီကိစ္စကိုလည်း ကျမတို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။”ဟု ပြန်လည်ဖြေဆိုသည်။
ဧပြီလ ၆ရက်နေ့က နော်စီဖိုးရာစိန်ဦးဆောင်သည့် ကေအဲန်ယူ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ ၁၄ဦးနှင့် မြန်မာ အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘက်မှ ရထားပိုးဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၇ဦး အပါအ၀င် ကိုယ်စား လှယ် ၁၉ဦးတို့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးကာ ဆုံးဖြတ်ချက် ၁၃ချက်ဖြင့် နှစ်ဖက် သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ကြ သည်။
ထို့အပြင် ကေအဲန်ယူ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၇ရက်နေ့ နေပြည်တော်တွင် မြန်မာအစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်၌ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၄ခုအပြင် ဧပြီလ ၈ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့က ကေအဲန်ယူသည် မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံကာ ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်ဆိုင်းရေး သဘောတူလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက် ဇန်န၀ါရီ ၁၆ရက်နေ့၌ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်တနေရာတွင် ပထမဆုံး အ ကြိမ် လူထုရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 3:49 PM ,0comments
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးရန် ဒေသခံလူထုနှင့် KNPP တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်
အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်သူလူထု၏ လိုအပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ကရင်နီအမျိုးသား တိုး တက်ရေးပါတီ(KNPP)က ကယားပြည်နယ်ရှိ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
“ပြည်နယ်အဆင့်ပြီးရင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် သွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီအဆင့်မသွားခင် လူထုတွေဘက်က ဘာတွေ တောင်းဆို ချင်တာရှိလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သွားရောက်ကြားနာတဲ့အနေနဲ့ သွားတွေ့မှာပါ”ဟု KNPP မှ အတွင်းရေးမှူး ခူးဦးရယ်က ပြောသည်။
KNPP မှ အတွင်းရေးမှူး(၂) ဦးအောင်ဆန်းမြင့် ဦးဆောင်ပြီး ဗဟိုကော်မတီဝင်များ၊ ကရင်နီလူငယ်အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည့် ကိုယ်စား လှယ် ၃၆ဦးသည့် ယနေ့ နံနက် ၆နာရီတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ ခရီး စတင် ထွက်ခွာသွားကြသည် ဟု သိရသည်။
ထိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အုပ်စု ၃စုခွဲကာ လွိုင်ကော်၊ ရှားတော၊ ဒီးမော့ဆို၊ ဖရူဆို၊ ဘောလခဲ၊ ဖာဆောင်နှင့် မယ်စဲမြို့နယ်များရှိ ဒေသခံ ပြည်သူများနှင့် သီတင်း ၂ပတ်ကြာ တွေ့ဆုံကာ အစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို ရှင်း လင်းပြောကြားသွားမည်ဟု ခူးဦးရယ်က ပြောသည်။
၎င်းက “ကျနော်တို့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းက ပြည်နယ်အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ချပြ မယ်။ ပြည်နယ်အဆင့် သဘောတူညီချက်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ လူထုသတင်း အမှန်အကုန်ရအောင် ချပြတဲ့သဘောပါ”ဟု ပြောသည်။
သတ်မှတ်ထားသည့် မြို့နယ်ရှိ ဒေသခံများနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ ပြန်လည်တွေ့ဆုံကာ ဧပြီလကုန်ခန့်တွင် ဌာန ဆိုင်ရာ နေရာများသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြမည် ဖြစ်သည်။
မတ်လ ၇ရက်နေ့က အစိုးရနှင့် KNPP တို့သည် ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့ ပြည်နယ်ဧည့်ရိပ်သာ ကန္တာရ၀တီခန်းမတွင် ဆက်ဆံ ရေးစခန်းများကို နှစ်ဖက် သဘောတူသည့်နေရာတွင် (လက်နက်မပါ)ထားရှိရေးအပြင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေး မှုများ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန်စသည့် သဘောတူညီချက်များ ပါဝင်သည့် ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ပဏာမ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများ အားလုံးရပ်ဆိုင်းရန်၊ ကရင်နီပြည်နယ်အတွင်း အစိုးရ တပ်စခန်းများ ထပ်မံတိုးချဲ့ခြင်းမလုပ်ရန်၊ စစ် ရေးလေ့ကျင့်မှုများနှင့် ကျောင်း(စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း) တည်ဆောက်မှုများရပ်တန့်ရန်နှင့် တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ် ပေါ်နေသည့် စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ တချိန်တည်း ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရန် စသည့်အချက် ၂၀ပါ KNPP ၏ တင်ပြ ချက်ကို အစိုးရဘက်က မူအားဖြင့်သာ သဘောတူညီခဲ့သည်။
ခူးဦးရယ်က “သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကတည်းက ဒီနေ့အထိ တစ်စုံတစ်ရာ ပြဿနာ မရှိဘူး။ အစိုးရတပ်စခန်းများ တရားဝင် ရုတ်သိမ်းခြင်းမျိုး မရှိသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ရရှိထားတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေထဲမှာ အဲဒီအချက်က တရားဝင် သဘောတူခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ပွားအောင်တော့ ဆက်ထိန်းမယ်လို့ သဘောတူညီထားတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲ မဖြစ်တော့ ဘူး။”ဟု ပြောသည်။
ယခုလပိုင်းအတွင်း KNPP နှင့် အစိုးရ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ အကြိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် နေရာနှင့် နေ့ရက် အတိအကျကို ထပ်မံ ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
KNPP နှင့် အစိုးရတို့သည် ပြီးခဲ့သည့် ၁၉၉၅ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူခဲ့ကြပြီး သုံးလကြာမြင့် သည့် ဇွန်လ ၂၉ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် ပျက်ပြားသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 3:45 PM ,0comments
Monthly News Commentary - April 2012 (Eng)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး အခွင့်အလမ်းနဲ့ စိန်ခေါ်မှုမျာ
18 ဧပြီ 2012
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအရ ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု အလားအလာတွေ ရှိနေပေမဲ့ သတိထားစရာတွေ အများအပြား ရှိနေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲက ပြောလိုက်ပါ တယ်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ၊ တာဝန်ခံ မှုတွေနဲ့အတူ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုတွေကို ခွဲဝေခံစားနိုင်မယ့် အခြေအနေတွေ ဖန်တီးပေးဖို့ လိုမယ်လို့ ၀ါရှင်တန်မြို့တော် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရုံးချုပ် နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ပြောသွားကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က ပြောပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“လတ်တလောရှိနေတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ဦးစားပေးရ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေ အတော်များများဟာ ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက ရှိနေတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မဖယ်ရှားခင်မှာလည်း လုပ်ဖို့လို တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးအရ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့ပါ။ ဒါမှလည်း လူတွေ စီးပွားရေး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်၊ စိတ်ချလက်ချ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နိုင်ကြပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီထဲက တချို့ဟာ လုပ်မယ်ဆိုရင် သိပ်လည်း မခဲယဉ်း ပါဘူး။ ငွေကြေး လည်း ကုန်ကျစရာ မလိုသလို အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ လုပ်နိုင်စွမ်းရည်တွေတောင် တက်လာ ဦးမှာပါ။ ကျနော်တို့ ပြောနေတာက အစိုးရ ကနေ အကုန် လျှောက်လုပ် နေတာတွေကို ရပ်ဖို့ပါ။”
စီးပွားရေး ပညာရှင် တာနဲလ် ကတော့ ဘယ်အပိုင်းတွေမှာ ငွေကြေးသုံးစွဲနေသလဲ ဆိုတာတွေကို ခြေရာခံ ကြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ အကြံပြုခဲ့ တာပါ။ ဘဏ္ဍာရေး ရ/သုံးမှန်းခြေကို နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း လွှတ်တော်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်နိုင်တာမျိုးဟာ ဖွံ့ဖြိုး မှုအတွက် ခြေလှမ်းကောင်းတရပ် ဖြစ်ပေမဲ့လည်း စစ်တပ်အတွက် အသုံးစရိတ်တွေ လျော့မလာဘဲ တခြား အရေးကြီးတဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာတော့ လိုအပ်ချက်ထက် နည်းပါးနေတာတွေဟာလည်း ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေလို့ ပါမောက္ခ တာနဲလ်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရကတော့ စီးပွားရေးမှာ လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးမယ်လို့ ကတိပေးပြီး တဲ့နောက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်ဖို့ အကူ အညီတွေ တောင်းခံလာရာက ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ ချီပြီး မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဆက်အဆံမရှိခဲ့တဲ့ IMF ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ ADB တို့လို ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ မကြာသေးခင် နှစ်တွေကစလို့ ပြန်လည် ထိတွေ့ ဆက်ဆံလာကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက လက်တွေ့ အခြေအနေတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့၊ အစိုးရကို အကြံပေးဖို့နဲ့ အနာဂတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာတွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလကစလို့ ADB နဲ့ IMF တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ပင်တိုင် ဆွေးနွေးသူ တဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ အဖွဲ့က မခင်ဥမ္မာက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြာသေးခင် အချိန်တိုအတွင်း အပြောင်းအလဲတွေ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ အပေါ်မှာတော့ နိုင်ငံ တကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက အားတက်စကား ပြောခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပွင့်လင်း မြင်သာမှုတွေ၊ တာဝန်ခံမှုတွေ ရှိဖို့လည်း လိုမယ်လို့ သတိပေးခဲ့ကြတာပါ။ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်လာနိုင်မယ့် မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း ရှိနေတာမို့ ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ၀င်လာတဲ့ အခါ ဒေသခံ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် နစ်နာမှုတွေ မဖြစ်ရလေအောင် အစီအမံတွေ လည်း လိုမယ်လို့ ဆွေးနွေးသူတွေက တညီတညွတ်တည်း ပြောခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
▼ 04/15 - 04/22 (82)
ဦးသိန်းစိန် ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်း...
မြန်မာနဲ့ ကုန်သွယ်မှုဖွင့်ဖို့ ဂျင်မ်ဝက်ဘ် တိုက်တွန...
မြန်မာ အတွက် ဂျပန် ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ ပြန်ပေးတော့...
အိန္ဒိယ တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် ပစ်လ...
ဖွဲ့စည်းပုံကို လေးစားလိုက်နာမည်ပါမည်ဟု ပြင်ဆင်မှ ဒ...
ပြည်သူလူထု၏ ပဲ့တင်သံများကို လွှတ်တော်တွင် တင်ပြသွား...
ဒုက္ခသည်များအား ဒုတိယအကြိမ် လူထုရှင်းလင်းပွဲကေအဲန်ယ...
ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဆွေးနွေးရန် ဒေသခံလူထုနှင့် KNPPေ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး အခွင့်အလမ်းန...
ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေတည်ငြိမ်မှု ရေရှည် စိတ်မချရ
EU နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအကြီးအကဲ မြန်မာ ခရီးစဉ် အတည်...
အမေရိကန်ပိတ်ဆို့မှု လျှော့ချရေးတုံ့ပြန်မှု မြန်မာအစိ...
၀ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု အခမ်းအနား
ဖွံ့ဖြိုးမှု အနိမ့်ဆုံး စာရင်းထဲ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင...
မြန်မာအစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖင်လန်...
တပ်ကြပ်ကျော်ဆန်း ခေါင်းဆောင်သော KIA အဖွဲ့ လက်နက်ချ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ် အမေရိကန်ကြိုဆို...
ကုလားတန် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ရေရှည်အကျိုး...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ အခ...
မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ရေး ဆွေးနွေးရန် နာဂ NSCN ...
ဇွန်လအတွင်း ဒေါ်စု ဗြိတိန်နှင့် နော်ဝေသို့ သွားမည်
အစိုးရထံ လက်နက်ချသွားသူများမှာ ပြည်သူ့စစ်များဟု KI...
Monthly News Commentary - April 2012
IAEA ကိုယ်စားလှယ် မြောက်ကိုရီးယား စေလွှတ်ရေး အစီအစဥ...
ဒေါ်စု မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်း အလှူ ကော့မှူးမှ...
အာဖဂန် သမ္မတ အမေရိကန်ထံက နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ နှစ် ဘီလီယံ ...
နျူကလီးယား အရေး စိုးရိမ်မှု အီရန် ဖြေရှင်းရန် အသင့်...
ဂျင်(မ်)ယုံကင်(မ်) ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ရွေးချယ်...
ကူညီရေး လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဘဏ္ဍာရေး ပိတ်ဆို့မှုတချို့ အ...
အရှေ့အာရှဒေသ လုံခြုံရေးရာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ မြန်မ...
၈၈ မျိုးဆက်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လ...
သောကြာ ဆုတောင်းအဖွဲ့ သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ကျင်းပ
လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ် မဏ္ဍပ်တခုတွင် လက်နက်ကိုင်တစုနှင့်...
သြစတြေးလျ၊ နော်ဝေ၊ အမေရိကန် ပိတ်ဆို့မှုများ လျှော့ခ...
လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပျော်မြူးနိုင်တဲ့ ရန်ကုန် ကန်တေ...